sosegado : July 2013
သိပ် မုန်းဖို့ကောင်းတဲ့ မိန်းမ အပိုင်း၂
ရန်ကုန်မြို့ ကမ္ဘာအေးလမ်းပေါ်တွင် စားသောက်ဆိုင် တစ်ခု ရှိပါသည်၊ ထိုဆိုင်သည် ကျနော့်သူငယ်ချင်းပိုင်သော ဆိုင်ဖြစ်ပြီး၊ ထိုဆိုင်ဖွင့်ဖြစ်ရန် ကျနော်သည် ငွေကြေး အထောက်အကူပြု ခဲ့ပါသည်၊ တစ်နေ့ ကျနော်နှင့် အပေါင်းအသင်း တစ်ချို့ ထောင့်ကြကြ စားပွဲတွင် ထိုင်ကာ အစားအသောက်များကို ဖြည်းဖြည်းခြင်း စားနေကြသည်၊ ဒီစားပွဲသည် ဆိုင်တစ်ခုလုံးကို ခြုံ၍မြင်ရသော နေရာလည်း ဖြစ်သည်၊ တကယ်တော့ ဒီဆိုင်တွင် လူငယ်တွေအများဆုံး လာရောက်စားသုံးကာ အချိန်ဖြုန်းသော ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်ပါသည်၊ ယနေ့ လူငယ်များသည် လက်ရဲဇက်ရဲရှိလာသည်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုမစိုက်ကြတော့သည်ကိုလည်း မြန်မာပြည် ပြန်ရောက်လာပြီးမှ ကျနော် ကိုယ်တွေ့သိလာခဲ့သည်၊ မိန်းကလေးငယ်လေးများ အတွက်လည်း ဘီယာသောက်ခြင်း အရက်သောက်ခြင်းများသည် ထင်ထင်ပေါ်ပေါ် ဖြစ်လာခဲ့သည်၊ စားသောက်နေသူထဲတွင် ကျနော်တို့သည် အသက်ကြီးဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မည်၊ ထိုဆိုင်၏ အလယ်စားပွဲရှည် တစ်ခုတွင် လူငယ် ကောင်မလေး ငါးယောက်နဲ့ ကောင်ကလေး နှစ်ယောက်တို့ ထိုင်ကာ စားသောက်နေကြသည်၊
‘ဟေ့သီရီ ဟိုထောင့်က လူကြီးတစ်ယောက် နင့်ကိုရှုနေတယ်၊ စပွန်စာပေးချင်ပြီ ထင်တယ်’
“ဟေ ဝေးမှာပဲ၊ စိတ်မဝင်စား၊ နင်သွားပြောလိုက် သုံးနှစ်လောက်စောင့်လို့၊ နောက်ဆုံးနှစ်မှ စပွန်စာရှာမယ်လို့၊ ခု အချိန်မကျသေးဘူးလို့ သွားပြောလိုက်”၊
‘ငါးယောက် စလုံးဆို ချက်ချင်းလက်ခံလိုက်မယ်လို့ သွားပြောချီ၊ ဟားဟားဟား’
‘ငါတို့လည်း စပွန်စာ ဘရုတ်ကာဖီးလေး လိုချင်တယ်လို့’၊ “ဟားဟားဟား”
သူတို့ အချင်းချင်း ကျနော်တို့ ဝိုင်းကို ကြည့်ကာ ပြောနေကြခြင်းဖြစ်သည်၊ ကျနော်တို့ကလည်း ကြည့်နေမိသည်ကိုး၊
သူတို့အဖွဲ့ ပြန်ကာနီး သီရီဆိုသော ကောင်မလေး ကျနော်တို့ဝိုင်းကို တည့်တည့်လျှေက်လာပြီးတော့၊ ဘာဖြစ်ချင်လဲ၊ ကြည့်စရာရှားနေလား ဆိုပြီး၊ လက်မနှင့် လက်သန်းထောင်ပြသွားသည်၊ ကျနော်တို့ အဖွဲ့ကတော့ ပြုံးကြည့်ပြီး ကျန်ရစ်ခဲ့သည်၊ ကျနော်တို့ထဲက တစ်ယောက်က ကျနော့်ကို ဆရာရေ ချက်တော့ ထိသွားပြီဆိုပြီး ပြောလိုက်သည်၊ ဟုတ်ပါသည်၊ ကျနော်သည် သီရီဆိုသော ကောင်မလေးကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ် တစ်နာရီ ကျော်ကျော်လောက် သေချာကြည့်ခဲ့ဘူးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
သီရီဆိုသော ကောင်မလေးသည် ရဲရင့်ပါသည်၊ သွက်လက်ပါသည်၊ ထက်မြက်ပါသည်၊ သို့သော် ထိုရဲရင့်မှု၊ သွက်လက်မှု ထက်မြက်မှုတို့သည် တစ်လွဲတွေ ဖြစ်နေသည်လို့ ကျနော်ထင်သည်၊ နောက်ပြီး အန္တရာယ်လည်း ရှိပေသည်၊ သူမကို သေချာ လမ်းညွှန် ထိမ်းပေးမဲ့သူ လိုအပ်နေသည်ဟု ကျနော်ထင်မိသည်၊ ကျနော်၏ အတွေ့အကြုံ လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့မှုတွေအရ သီရီဆိုသော ကောင်မလေးကို အပေါ်ယံသဘော တော်တော်နာလည်း နေပါပြီ၊ သေချာတာ တစ်ခုကတော့ သီရီဆိုသော ကောင်မလေး၏ ရယ်ရွှင်နေမှု ပျော်ရွှင်နေမှုတို့ နောက်ကွယ်တွင် ထိန်းချုပ် ထိမ်ချန်ထားသော အရာများ ရှိပါလိမ့်မည်၊ သူမတို့ သူငယ်ချင်း ငါးယောက်စလုံးတွင် သီရီသည် အိမ်မှာ အနေအနည်းဆုံးလည်း ဖြစ်နေသည်။
တစ်နေ့ ကိုးမိုင်ရှိ ကော်ဖီဆိုင် တစ်ခုတွင် ကျနော် တစ်ယောက်ထဲ မနက်စာ စားနေချိန်မှာတော့ သီရီ ထိုဆိုင်သို့ ရောက်လာပါသည်၊ ကျနော်ထိုင်နေသော စားပွဲကို တည့်တည့် လျှေက်လာကာ ကျနော်ရှေ့တွင် ဝင်ထိုင်လေသည်၊
“ထိုင်မယ်နော် ဖြစ်တယ် မဟုတ်လား”၊ ကျနော်က ‘ထိုင်ပါ သီရိ’၊
“ဒီမှာ သီရိ မဟုတ်ဘူး သီရီ”၊
“ကျမက သီရိလို့ ကျမကို ခေါ်တဲ့ သူတွေကို သိပ်မုန်းတယ်”၊
အမုန်းဆိုသော စကားကို သူမဆီက ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ကြားရခြင်း ဖြစ်ပါသည်၊
“ဒီမှာ ကျမတို့ကို လိုက်ကြည့်နေတယ် မဟုတ်လား၊ ကျမတို့ကလည်း ပြန်ပြီးလိုက်ကြည့် နေတယ်ဆိုတာ သိရအောင်၊ ဒီမယ် စားနေကြ ဒီကော်ဖီဆိုင်ကို လာခဲ့တာ”၊
‘တစ်ယောက်ထဲ လာခဲ့တာလား’၊ ကျနော်မေးလိုက်သည်၊
“ဟုတ်တယ် ကျန်တဲ့သူတွေက သူတို့အိမ်မှာပဲ အားဦးမှာ မဟုတ်ဘူး၊ ကျမက အိမ်မှာကို မနေချင်တာလေ၊ လာတုန်းကတော့ ရတဲ့ သတင်း မှန်မမှန်ကြည့်ပြီး ပြန်မလို့၊ နောက်တော့ ခင်ဗျားကို ချဲလင်းချင်စိတ် ပေါက်လာတာနဲ့ ဝင်လာတာ”၊ မျက်ခုံးလေး နှစ်ဘက်ကို ပင့်ကာပင့်ကာ ပြောသည်၊ တကယ်တော့ သီရီသည် တော်တော် ချစ်စရာကောင်းသော ကောင်မလေးပါ၊ တော်တော်လည်း ရဲရင့်သည့် သဘောရှိသည်။
မှာလေ မနက်စာမှာလေလို့ ကျနော်ပြောလိုက်သည်၊ သီရီ မနက်စာကို မှာလိုက်သည်၊ သူမှာသော မနက်စာသည် ကျနော်မှာထားသော မနက်စာနဲ့ တူလို့နေသည်၊
“ကျမက ဟော့ဒေါ့ကြိုက်တယ်၊ ဒီကော်ဖီရဲ့ အနံ့ကိုလည်း ကြိုက်တယ်လေ၊ ကျမကအနံ့နဲ့ ပတ်သက်ရင် နည်းနည်းဆန်းစတစ်ဖြစ်တယ်”၊ မမေးရပဲ ဖြေလေသည်၊
“ဒီမှာ လူကြီး၊ မကြိုက်ရင် ဒီမှာလို့ပဲ ခေါ်မယ်၊ ဒီမှာ ကျမနောက် လိုက်ကြည့်နေတယ်ဆိုရင် ရပ်တန်းက ရပ်ပါ၊ ဒါပြောချင်တာ အဓိကပါပဲ”၊
“အနှောင့်အယှက် မပေးဘူး၊ ဒါပေမဲ့ စိတ် အနှောင့်အယှက် ဖြစ်တယ်၊ သိနေ မြင်နေတယ်လေ”၊
‘သီရီ ဘာမှ မစိုးရိမ်ပါနဲ့’၊
“ကျမက ဘာမှ စိုးရိမ်တတ်တဲ့သူ မဟုတ်ဘူး၊ စိတ် အနှောင့်အယှက်တွေကို ဖယ်ထားတတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကျန်တဲ့သူတွေက ကျမကြောင့်လို့ ပြောလာတော့ ကျမ နေရခက်တယ်”၊
“နောက်ပြီး ကျမက လူတတ်ကြီး လုပ်တဲ့သူတွေကို သိပ်မုန်းတယ်”၊
“ခု စားပြီးပြီ၊ ပြောပြီးပြီ သွားတော့မယ် ဒါပဲ”၊
ထိုသို့ပြောပြီး သီရီ ဆိုင်ထဲက ထွက်သွားပါသည်၊ ထွက်သွားသော သီရီကို ကြည့်ရင်း၊
ကျနော့်စိတ်ထဲမှာတော့ တစ်စုံတစ်ရာ ကျန်ခဲ့သလိုနေပါသည်။
မေဇင်ထွေးနဲ့ တင်မူယာအေး ဆိုတဲ့ ညီမဝမ်းကွဲ နှစ်ယောက်ရှိသည်၊ တကယ်တော့ သူတို့ အဖေတွေက ညီအစ်ကို ဝမ်းကွဲတွေပါ၊ ဒါပေမဲ့ ညီအစ်ကိုအရင်းလို ချစ်ကြသည်၊ နှစ်ယောက်လုံးကလည်း တစ်ဦးတည်းသော သားများဖြစ်လေသည်၊ မေဇင်ထွေးနဲ့ တင်မူယာအေး တို့သည်လည်း တစ်ဦးတည်းသော သမီးများ ဖြစ်ကြသည်၊ မေဇင်ထွေး၏ အဖေက အစိုးရဝန်ထမ်း တစ်ဦးဖြစ်သည်၊ နယ်စုံသို့ ပြောင်းကာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည်၊ တင်မူယာအေး၏ အဖေက မိဘလုပ်ငန်းကို ဆက်လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးတွင် အဆင်ပြေသည်၊ အလုံဘက်တွင် ခြံနှင့်ဝင်းနဲ့ နေနိုင်သည်၊ တစ်ခါတစ်လေ မေဇင်ထွေး၏ အဖေ ဝေးသောနယ်ဘက်တွေ ပြောင်းရလျှင် မေဇင်ထွေးတို့ မိသားစုကို တင်မူယာအေးတို့ အိမ်မှာ ထားခဲ့လေ့ရှိသည်၊ မေဇင်ထွေး တက္ကသိုလ် တက်သောအခါလည်း တင်မူယာအေးတို့ အိမ်မှ တက်ခဲ့သည်။
တင်မူယာအေးသည် မေဇင်ထွေးထက် အသက်၆လ ကြီးသည်၊ ဒါပေမဲ့ ငယ်စဉ်ကပင် အစ်မကြီးပုံစံနေခဲ့သည်၊ မေဇင်ထွေးသည် ကျောင်းစာထက်မြက်သော်လည်း တင်မူယာအေးသည် ဆယ်တန်းကိုပင် အောင်မှတ်ကပ်၍အောင်ခဲ့သည်၊ မေဇင်ထွေးတို့ မိသားစုသည် အရမ်းမြန်မာဆန်သည်၊ ဒါပေမဲ့ တက္ကသိုလ်ရွေးချယ်သောအခါ သမီးစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စေသည်၊ မေဇင်ထွေးသည် အမှတ်ကောင်းသော်လည်း ကွန်ပြူတာ တက္ကသိုလ်ကို ရွေးချယ်ခဲ့သည်၊ ကျောင်းမြန်မြန်ပြီး အလုပ်မြန်မြန်ရ မိဘတွေကို ပြန်လုပ်ကျွေးဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့သည်၊ တင်မူယာအေးကတော့ ရွေးစရာသိပ်မရှိပါ သင်္ချာ ဘာသာတွဲကိုသာ ယူခဲ့သည်၊ တက္ကသိုလ်တက်ခါစက တင်မူယာအေးက နောက်ပြောင်သလိုလိုနဲ့ မေဇင်ထွေးကိုပြောသည် ‘နင် ကွန်ပြူတာ တက္ကသိုလ်တက်တာ ငါသိပ်စိတ်ချမ်းသာသွားတယ်၊ နင် ဆရာဝန်ကြီးတွေ အင်ဂျင်နီယာကြီး ဖြစ်မလာတော့ဘူးပေါ့’၊ တင်မူယာအေးသည် ငယ်စဉ်ကပင် အရာရာကို လိုက်ပြိုင် အနိုင်ယူချင်သူ ဖြစ်သည်၊ မေဇင်ထွေးက ဘယ်လိုမှ မနေပါ။
တစ်ခါမှာတော့ တင်မူယာအေး၏ အဖေနဲ့ လုပ်ငန်းဆက်စပ်နေသော လူတစ်ဦး၏ သားသည် တင်မူယာအေး၏ အိမ်သို့ အဝင်အထွက်ရှိလာသည်၊ ထိုသူ၏ အမည်မှာ ကောင်းမြတ်ထူးဖြစ်သည်၊ ကိုကောင်းမြတ်ထူးသည် တင်မူယာအေးအိမ်သို့ ဝင်ထွက်သွားလာရင်း၊ တင်မူယာအေးကိုရော မေဇင်ထွေးကိုပါ သတိထားမိသည်၊ အိမ်နဲ့ကျောင်းသွားရင် ရိုးရိုးလေးနေသော မေဇင်ထွေးကို စိတ်ဝင်စားသလိုလို ရှိနေသည်၊ ထိုသည်ကို ရိပ်မိသော တင်မူယာအေးသည်၊ ကိုကောင်းမြတ်ထူးရှေ့တွင် မေဇင်ထွေးကို ဆူပူခြင်း မကောင်းပြောခြင်းများ လုပ်လာလေ့ရှိသည်၊ နောက်ပိုင်း တင်မူယာအေးသည် ကိုကောင်းမြတ်ထူးနဲ့ တွဲသွားတွဲလာ ပိုများလာသည်၊ တင်မူယာအေးသည် မေဇင်ထွေးထက် ပိုချောသည် ဆိုသည်မှာ မှန်ပါသည်၊ ထိုအပြင် ပိုသွက်၍ ရဲရင့်လေသည်၊ ငယ်စဉ်ထဲကပင် တင်မူယာအေးသည် မေဇင်ထွေးလိုချင်သော အရာများကို လိုချင်တတ်သူဖြစ်သည်၊ ထိုအရာများကိုလည်း သူပဲရပြီး မေဇင်ထွေးကို မရစေချင်ပါ၊ တစ်ခါတစ်လေ ကစားစရာ အရုပ်ကလေးတွေကို မေဇင်ထွေးဆီက ရအောင်ယူပြီး မေဇင်ထွေးကို ပြန်ပေးရမည်စိုး၍ ဖျက်ဆီးလိုက်လေ့ ရှိသည်။
ကိုကောင်းမြတ်ထူးနှင့် တင်မူယာအေးတို့ တစ်တွဲတွဲ ရှိနေသောအချိန်တွင် မေဇင်ထွေးသည် အတန်းထဲက ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ ရင်းနှီးနေကြောင်း တင်မူယာအေးသိလာခဲ့သည်၊ ထိုအချိန်မှာပင် မေဇင်ထွေးတို့ မိသားစု ရန်ကုန်တွင် အခြေချနေထိုင်ရန် လှိုင်ဘက်သို့ တင်မူယာအေးတို့အိမ်မှ ပြောင်းရွေ့သွားခဲ့သည်၊ ကိုကောင်းမြတ်ထူးနဲ့ တင်မူယာအေးတို့ ချစ်သူမဖြစ်ကြသေးသော်လည်း မေဇင်ထွေးသည် သူ့တွင် ချစ်သူရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း တင်မူယာအေးကို ပြောပြခဲ့သည်၊ တင်မူယာအေးက တွေ့ချင် မြင်ဖူးချင်သည်ဆို၍ ချစ်သူနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်၊ ထိုအချိန်မှ စ၍ တင်မူယာအေးသည် ကိုကောင်းမြတ်ထူးနဲ့ တွဲသွားတွဲလာ လျှော့လာပြီး၊ မေဇင်ထွေးတို့နဲ့ တစ်တွဲတွဲ ဖြစ်လာသည်၊ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်၍ ချစ်သူကိုလည်း ယုံကြည်သော မေဇင်ထွေးကတော့ မည်သို့မျှ မဖြစ်ခဲ့ပေ၊ ကျောင်းပြီး၍ အလုပ်တစ်နှစ်လောက်လုပ်ပြီး စင်္ကာပူကို သွားရောက်အလုပ်လုပ်ဖို့ မေဇင်ထွေးတို့ ချစ်သူနှစ်ဦး ပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်၊ မေဇင်ထွေးတို့ စင်္ကာပူကိုထွက်လာသောအခါ တင်မူယာအေးလဲ လိုက်ပါလာသည်၊ စာရင်းစစ် (Accountant) လုပ်ရန် ပြင်ဆင်ခဲ့သည်လို့ဆိုသည်၊ ချစ်သူက ငြိုငြင်ပြောဆို ယူရအောင်ပင် မေဇင်ထွေးတို့ ချစ်သူနှစ်ဦးနှင့် တင်မူယာအေးသည် တစ်တွဲတွဲ ဖြစ်ခဲ့သည်၊ ဒီအတွက် အလိုလိုက်သော နားလည်ပေးသော ချစ်သူကို မေဇင်ထွေး ပိုချစ် ပိုမြတ်နိုးလာခဲ့သည်၊ မကြာမှီ အချိန်တွင်းမှာ ချစ်သူနဲ့ နှစ်ကိုယ်တူ ဘဝခရီး အတူလျှောက်လှမ်းရတော့မည်ဟု မေဇင်ထွေး တစ်ယောက်ယုံကြည် ထားခဲ့ပါသည်။
ကန်တော်ကြီးနားက ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ သီရီတို့ အုပ်စုနဲ့ တခြား လူငယ်အုပ်စု စကားများရန်ဖြစ်ကြသည်၊ ထိုအုပ်စုသည် သီရီတို့ အုပ်စုကို ရန်စမှုများ ရှိနေသည်လို့ကြားရသည်၊ ထိုအုပ်စုတွင် စစ်တပ်မှ ကြီးကြီးအရာရှိ တစ်ဦး၏ သားလည်းပါလေသည်၊ မိုက်ရိုင်းဆိုးသွမ်းသော အုပ်စုလို့ဆိုသည်၊ တခြားလူငယ် အုပ်စုများကို အနိုင်ကျင့်လေ့ရှိသည်၊ တော်တော်များများက သူတို့ကို ရှောင်ကြသည်ဟုဆိုသည်၊ ပြဿနာဖြစ်ပြီးရင် အရာရှိများ လိုက်လာကာ ပါဝါသုံး ဖြေရှင်းလေ့ ရှိသည်၊ တစ်နေ့မှာတော့ ကမ္ဘာအေးဆိုင်ကို ကျနော်ရောက်သွားသောအခါ သီရီတို့ အုပ်စုနဲ့ ထိုအုပ်စု ရန်ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်၊ ရန်ဖြစ်သည်ဟုဆိုရာ၌ ထိုအုပ်စုမှ သီရီတို့ အုပ်စုကို အနိုင်ကျင့်နေခြင်းဖြစ်သည်၊ သီရီတို့ အုပ်စုမှ ကောင်လေး ကောင်မလေးတွေသည် ကြမ်းပေါ်တွင် ပုံစံထိုင်နေရသည်၊ မထိုင်သူကတော့ သီရီပါပဲ၊ မထိုင်သူ သီရီကို ထိုကြီးကြီးအရာရှိ တစ်ဦး၏ သားက ဆံပင်ဆွဲကာ အတင်းထိုင်အောင် လုပ်လို့နေသည်၊ ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေလည်း ဝင်မပါရဲကြပါ၊ ကျနော်၏ တောင်းဆိုချက်အရ ကျနော်နဲ့ သူငယ်ချင်းတို့ ထိုအုပ်စုကို သွားပြီး ရပ်ဖို့ပြောသည်၊ ထုံးစံအတိုင်း မင်းတို့က ဘာကောင်တွေလဲ၊ ဘာဝင်ရှုပ်တာလဲ လုပ်သည်၊ ကျနော်ကတော့ အေးအေးဆေးဆေးပင် ဒီမှာ စီစီတီဗီတွေရှိတယ်၊ ဒီလုပ်ရပ် သတင်းပျံ့သွားရင် မင်းအဖေတွေ ဘာဖြစ်မလဲ သိသလား၊ အဘကရော ဒီလိုနေမယ်တဲ့လား၊ အဖေတွေဆိုတဲ့ ချက်ကောင်းကို ထိသွားသောအခါ ထိုအုပ်စုတွေထွက်သွားသည်၊ အဲဒီအချိန်တုန်းက ဒီလိုဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖွင့်ဘို့အရေး ကျနော်တို့လည်း အဘတစ်ယောက်လိုသည် မဟုတ်ပါလား၊ ထိုအုပ်စုသည် စွာကျယ်စွာကျယ်လုပ်သော သီရီကို အငြိုးထားနေမည်မှာ သေချာပါသည်၊ သီရီတို့ အုပ်စုမှ ကောင်လေး ကောင်မလေးတွေ၏ မျက်နှာတွင် ခံပြင်းခြင်း စိုးရိမ်ခြင်းများ ရောထွေးနေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်၊ သီရီ၏ ‘တောက်’ ဆိုသော ခေါက်သံနှင့်အတူ သီရီတို့ အုပ်စု ဆိုင်မှ ထွက်သွားကြသည်၊ ကျနော့်ဘဝတွင် ပထမဦးဆုံး လူကိုလူချင်း အနိုင်ကျင့်ခြင်းကို တွေ့ရှိခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
နောက် နှစ်ပတ်ကြာ တစ်နေ့မှာ၊ သူငယ်ချင်းက ဆိုင်ကိုအမြန်လာရန် ဖုန်းဆက်ခေါ်သဖြင့်၊ ကျနော်ရောက်သွားခဲ့သည်၊ ဆိုင်ကိုရောက်၍ တွေ့ရသည်မှာ၊ ဆိုင်ထဲရှိ လူငယ်တစ်ချို့ကို ရဲနှင့် စစ်တပ် အရာရှိများက ဝိုင်း၍ဖမ်းဆီးနေခြင်းဖြစ်သည်၊ ဆိုင်ထဲရှိ လူငယ်အုပ်စု သုံးစုလောက်ကို သိမ်းကျုံးဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားသည်၊ သီရီနှင့် သီရီတို့ အုပ်စုလဲ ပါသွားသည်၊ ကျနော်နှင့် သူငယ်ချင်းတို့ လိုအပ်သော ဆက်သွယ်မှုများပြုလုပ်ပြီး၊ ရဲစခန်းသို့ လိုက်သွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်၊ ကြားသိရသည်မှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ရက်က ထိုကြီးကြီးအရာရှိ တစ်ဦး၏ သားကို လူတစ်ချို့က အလစ်ဖမ်းဆီး၍ တစ်နေရာကိုခေါ်ပြီး ဝိုင်းရိုက်ကြရာ ဆေးရုံရောက်သွားတော့သည် ဆိုသည်၊ ဒီလိုနဲ့ တရားခံရှာပွဲကြီး စတင်လေတော့သည်။
ကျနော်တို့ ရဲစခန်းကို ရောက်သောအခါ ရဲစခန်းမှာ ဆူညံလို့နေပါသည်၊ လူငယ်တွေကို ဖမ်းခိုင်းသော စစ်အရာရှိများကို မတွေ့ရတော့ပေ၊ အဖမ်းခံရသော လူငယ်များ၏ မိဘဆွေမျိုးများ လိုက်လာကြသည်ကို တွေ့ရသည်၊ ဘာလို့ဖမ်းတာလဲက စကာ ရဲတွေနဲ့ အခြေအတင် စကားပြောနေသော လူအများကို တွေ့ရသည်၊ ကျနော်တို့ ဖမ်းတာ မဟုတ်ပါဘူးက စကာ ရဲများ၏ပြန်လည် ဖြေရှင်းသံများဖြင့် ဆူညံနေပါသည်၊ မိဘတွေနဲ့ ပါလာသော အထုပ်များကတော့ ရဲအရာရှိကြီး၏ အခန်းထဲတွင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်၊ ဝဝပုပု လူငယ်တစ်ဦးကိုတော့ ထိုရဲအရာရှိကြီးက သူ့အခန်းထဲတွင် ခေါ်ထားသည်၊ အအေးတွေတိုက် အစားအစာတွေ ကျွေးမွေးထားသည်ကို တွေ့ရသည်၊ ထိုအချိန်တွင် လူတစ်အုပ်ဝင်ရောက်လာသည် ထိုထဲတွင် ပုပုဝဝ လူတစ်ယောက်ပါသည်၊ အရမ်းဒေါသထွက်နေသော မျက်နှာနဲ့ဖြစ်သည်၊ ကျနော်သိပါသည် ထိုသူသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးပါ သူသားကိုဘာလို့ စခန်းခေါ်လာရတာလဲက စကာ ရဲတွေကို ဆဲပါတော့သည်၊ စစ်ဗိုလ်တွေကိုလည်း ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဆဲပါသည်၊ ရဲတွေက ကျေကျေလည်လည် တောင်းပန်နေသည်၊ နောက်တော့ သူသားကိုယ်တိုင် အရာရှိကြီး အခန်းထဲက ထွက်လာမှ ဆဲဆိုရပ်သွားသည်၊ ငါ့သားက ဒီလိုိကြီးကြီးအရာရှိသားနဲ့ မိန်းမပြိုင်လုရအောင် ငါ့သားကို ကြိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးနဲ့ ပေးစားလို့ရတယ်ကွလို့ အထွက်မှာ ပြောသွားသေးသည်၊ ဒီလိုနဲ့ လူငယ်တွေကို မိဘဆွေမျိုးတွေက လာခေါ်သွားလိုက်တာ သီရီနှင့် ကောင်လေးတစ်ယောက် ကောင်မလေး တစ်ယောက်ပဲ ကျန်တော့သည်၊ ကျနော်တို့ကတော့ ရုံးခန်းတစ်နေရာက အခြေအနေကို စောင့်လို့နေပါသည်။ ကျနော်သည် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ရဲတွေရှေ့တွင် စစ်ဗိုလ်တွေကို ဆဲရဲသော စီးပွားရေးသမားတစ်ဦးကို တွေ့ဘူးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထိုအချိန်တွင် သန့်သန့်ပြန့်ပြန့် လူတစ်ဦးဝင်လာသည်၊ နည်းနည်းလဲမူးလာပုံပေါက်သည်၊ သူ့ကို ဘာလို့ ခေါ်တာလဲ တာဝန်မှူးကို မေးသည်၊ သမီးကြောင့်လို့ တာဝန်မှူးကဖြေပြီး သီရီကို ခေါ်ထုတ်လာသည်၊ ထိုသူသည် သီရီ၏အဖေဖြစ်ကြောင်း ကျနော်သိလိုက်ရသည်၊ ကျနော် ပထမဦးဆုံး သီရီအဖေကို မြင်ဘူးခြင်း ဖြစ်ပါသည်၊ သီရီကိုမြင်သောအခါ သီရီအဖေ၏ မျက်နှာ ပြောင်းလဲသွားသည်၊ ဒေါသရိပ်တွေပေါ်လာသည်၊ သမီးမိုက်၊ သမီးဆိုး ဆိုပြီး အားလုံးရှေ့တွင် ရစရာမရှိအောင် အပြစ်ပြောပါတော့သည်၊ နောက်ဆုံး သမီးလမ်းသရဲကို ဆုံးမရအောင် နှစ်ရက်လောက် ဆက်ချုပ်ထားဖို့ ရဲတွေကိုပြောတော့သည်၊ ထိုအခါတွင် သီရီသည် ‘ဒက်ဒီကို သိပ်မုန်းတယ်’ ‘ဒက်ဒီကို သိပ်မုန်းတယ်’ ဆိုပြီး ငိုပါတော့သည်၊ နောက်ဆုံး ရဲအရာရှိကြီးက ခင်ဗျားမှုးနေတယ်ပြန်ဦး မနက်ကျမှ ခင်ဗျားသမီးကို လာခေါ်လှည့်ဆိုကာ ပြန်လွတ်လေသည်၊ ထိုသူလည်း ရဲစခန်းထဲက ပြန်ထွက်သွားသည် ပါးစပ်ကလည်း မခေါ်ဘူးကွာ ဘယ်တော့မှ လာမခေါ်ဘူး ဆိုပြီးရေရွတ်နေသည်၊ အဖေနဲ့သမီးတို့၏ ဆက်ဆံရေးကို ကျနော်သိရှိလိုက်ရလေသည်၊ ခုတော့ ကျနော်တို့ အလှည့်ရောက်လာပါသည်၊ ကျနော့်သူငယ်ချင်းက ရဲအရာရှိကြီးကို တီးတိုးစကား အနည်းငယ်ပြောလိုက်သည်၊ ထိုရဲအရာရှိကြီး ပျာပျာသလဲဖြစ်ကာ လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်၊ အဆင်ပြေစေရမယ် ဖြစ်ကုန်သည်၊ ကျနော်တို့လည်း သီရီနဲ့ သီရီ သူငယ်ချင်းကောင်မလေးကို ခေါ်ထုတ်လာခဲ့သည်၊ သီရီဆီမှ ပထမဦးဆုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆိုသော စကားကို ကျနော်ကြားခဲ့ရသည်၊ ထိုနေ့က သီရီကို သူ့ သူငယ်ချင်းအိမ်သို့ ကျနော်တို့ လိုက်ပို့ပေးခဲ့သည်၊ ကျနော် သီရီကို အချုပ်ခန်းထဲသို့ မဝင်စေချင်ပါ၊ သီရီက ကျနော်တို့ ဘာလို့ အကူအညီ ပေးတာလဲဆိုတာ မမေးခဲ့ပါ၊ အဲဒီနေ့မှာပဲ မြန်မာပြည်တွင် သူထက်သူ လူစွမ်းကောင်းများရှိကြောင်း ကျနော်သိရှိခဲ့လိုက် ရလေသည်။
စနေနေ့တရက်မှာတော့ ကျနော်အိမ်သို့ သီရီရဲ့သူငယ်ချင်းမလေး ရောက်လာသည်၊ ကျနော်ကို ငိုကြီးချက်မနဲ့ သီရီကို ကယ်ပေးဖို့ ပြောဆိုပါတော့သည်၊ သီရီကို သီရီအိမ်ထဲတွင် ချုပ်နှောင်ကာ ထိုအုပ်စုကာ နှိပ်စက်နေကြသည်၊ သီရီအဖေကို ခြောက်တလှည့် မြောက်တလှည့် လုပ်ခဲ့ကြသည်၊ နောက်ဆုံး သီရီအဖေကလည်း မသေရင်ပြီးရောဆိုပြီး ခွင့်ပြုခဲ့သည် ဆို၏၊ သီရီဆီက သူတို့သိချင်တာရအောင် နှိပ်စက် စစ်ဆေးနေကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်၊ သူတို့ သိချင်တာက ရိုက်သွားတာ ဘယ်သူလဲ ဆိုတာကိုပင်၊ သီရီမပြောမချင်း အမျိုးမျိုး နှိပ်စက်နေကြသည်၊ ရိုက်တဲ့သူက သမီးတို့မှ မဟုတ်တာ ဘယ်သူလို့ပြောရမှာလည်း ဆိုပြီး ကောင်မလေးသည် ငို၍ ကျနော်ကို ရှင်းပြပါသည်၊ ဒီလိုကောင်မျိုးတွေကို ရိုက်ချင်နေတဲ့ သူတွေ အများကြီးရှိသည်၊ ကျနော် ဒေါသတွေ ထွက်လို့လာသည်၊ လူမဆန်သောအုပ်စုကို၎င်း သီရီအဖေကို၎င်း ဒေါသတွေ ဖြစ်နေမိသည်၊ ဒီကိစ္စသည် အကွက်ချပြီး သေချာလုပ်ရမည် ဖြစ်သည်၊ မဟုတ်ပါက ကြီးကျယ်သွားနိုင်သည်၊ ထွက်ပေါ်နေသော ဒေါသကို ထိန်းယူလိုက်ရသည်၊ ကျနော်လည်း သူငယ်ချင်းတွေနှင့် အဆက်အသွယ်တွေဆီ ဖုန်းဆက်ရတော့သည်၊ သူငယ်ချင်းက ရှစ်မိုင်လမ်းဆုံနှင့် ကုန်းမြင့်သာယာဆီက ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ခေါ်လာမည်ဆိုသည်၊ မြန်မာပြည်တွင် သူထက်သူ လူစွမ်းကောင်းများရှိကြောင်း ကျနော်သိရှိထားပြီ မဟုတ်ပါလား။
ဝင်ဒါမီယာ ကြားလမ်းလေးတစ်ခုသို့ ကျနော်တို့ကားတွေ ကွေ့ဝင်လိုက်ပြီး ခြံလေးတစ်ခြံအတွင်းသို့ ဂိတ်ပေါက်ကို အတင်းဖြတ်ဝင်ရောက်လိုက်သည်၊ အိမ်ရှေ့တွင်ရှိနေသော လူတစ်ချို့ကို ကျနော်တို့နဲ့ပါလာတဲ့သူတွေက ထိန်းထားလိုက်သည်၊ ကြိုတင်သိထားသည့်အတိုင်း အိမ်နောက်ဂိုဒေါင်ဆီသို့ ကျနော်တို့ တိုက်ရိုက်သွားလိုက်ကြသည်၊ တံခါးမပိတ် ထားသော ဂိုဒေါင်ကို ကျနော်တို့ ဝင်လိုက်သောအခါ ဂိုဒေါင်ထဲတွင် လူတစ်ချို့ရှိနေကြသည်၊ လူငယ်တစ်ချို့လည်းပါသည်၊ ကုတင်ဟောင်း တစ်လုံးပေါ်မှာတော့ ကြိုးတုပ်ထားသော သီရီကို တွေ့လိုက်ရသည်၊ သီရီအဖေကိုတော့ မတွေ့ရပါ၊ သီရီသည် နှိပ်စက်ထားသော ဒဏ်ရာများဖြင့် မေ့မျောနေသယောင် ရှိသည်၊ ဂိုဒေါင်ထဲတွင် ရှိနေသောသူများသည် မထင်မှတ်ပဲ ကျနော်တို့ရောက်လာသည်ကို အံ့အားသင့်နေကြသည်၊ ကျနော်တို့နဲ့ ပါလာသော သူများကို ဘယ်သူတွေဆိုတာ သူတို့သိပါသည်၊ ကျနော်သီရီဘေးသို့သွားပြီး ကြိုးတွေကို သွားဖြေလိုက်သည်၊ သီရီဆီမှ ညည်းသံတိုးတိုးလေးကြားလိုက်ရသည်၊ နာကျင်လို့ နေမှာပါ၊ တော်တော်ရက်စက်တဲ့ သူတွေပဲ၊ ဒီလိုလူမျိုးတွေကြောင့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံး သိက္ခာကျ နေရတာဖြစ်သည်၊ သူငယ်ချင်းက ထိုလူတွေကိစ္စ ခေါ်လာတဲ့သူတွေနဲ့ သူလုပ်လိုက်မယ်ဆိုသည်၊ ကျနော်ကို သီရီကိုပဲ ဂရုစိုက်ဖို့မှာကာ ထွက်သွားသည်။
အပြင်က အသံတစ်ချို့ကို ကျနော်ကြားလိုက်ရသည်၊ ဒါငါ့အိမ်၊ ငါ့ခြံ ငါ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ လုပ်နေတာ၊ ဘာဖြစ်ချင်လို့လဲ၊ ဒီကောင်တွေက ဘာကောင်တွေမို့လဲ ဆိုတဲ့ ဒေါသဖြစ်နေသော လူတစ်ယောက်ရဲ့ အသံကိုကြားလိုက်ရသည်၊ ဝုန်းဆိုသော တံခါးကို ကန်ဖွင့်သံနဲ့အတူ ဂိုဒေါင်ထဲသို့ လူတစ်ယောက် ဝင်ရောက်လာသည်၊ သူငယ်ချင်းနဲ့ လူတစ်ချို့လည်း ဝင်လိုက်လာသည်၊ ဝင်လာသူသည် သီရီ၏ အဖေပဲ ဖြစ်ပါသည်၊ သူငယ်ချင်းတို့ကို ကျနော်ကပြန်ထွက်သွားရန် လက်နဲ့အချက်ပေးလိုက်သည်၊ သီရီအဖေသည် ကျနော်ကို သေချာစိုက်ကြည့်နေသည်၊ ကျနော်လည်း ထိုသူ၏မျက်နှာကို အထူးသဖြင့် မျက်လုံးနှစ်လုံးကို သေချာပြန်ကြည့်လိုက်မိသည်၊ ဒေါသနှင့် အမုန်းတွေကို မျက်လုံးတွေတွင် တွေ့နေရသည်။
‘မင်းကိုး၊ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား မင်းမဟုတ်လား၊ သေချာပါတယ် မင်းပါပဲ’၊
ကျနော်နဲ့ ထိုသူသည် သိကျွမ်းခဲ့ခြင်း မရှိပါ၊ မင်းဆိုသော အသုံးအနှုံးကြောင့် ထိုသူသည် ကျနော့်နာမည်ကို မသိတာလား၊ မေ့နေတာလားလည်း မသိပါ၊ နာမည်ကို မခေါ်ချင်တာလည်း ဖြစ်ပါလိမ့်မည်၊ ကျနော်ဘာမှ ပြန်မဖြေပါ၊ ဒေါသကြောင့် အသိတရားကင်းမဲ့နေသော သူတစ်ယောက်ကို ကြည့်သလို ထိုသူကို ကြည့်နေလိုက်မိသည်၊
‘ဟားဟားဟား’ ‘သွေးကစကားပြောတာပေါ့၊ ကယ်တယ်ရှင်ကြီးပေါ့ ဟုတ်လား ခုမှ ပေါ်လာတယ်’
‘မင်းဆိုတဲ့ကောင်ကို ငါကလည်း တွေ့ချင်နေတာ၊ ရှင်းချင်နေတာနဲ့ အတော်ပဲ၊ ဒီမှာကြည့်လိုက်’
ကုတင်ပေါ်တွင်ရှိသော သီရီကို ထိုသူသည် လက်ညိုးထိုးပြလိုက်သည်၊
‘အဲဒါ မင်းရဲ့သမီးလေ၊ သောက်သုံးမကျတဲ့ကောင်ရဲ့ သောက်သုံးမကျတဲ့ သမီး၊ ခံရတာတောင်နည်းသေး
ပြဿနာတွေ လှည့်ပတ်ရှုပ်လာတယ်၊ ငါ့ကို မထိခိုက်အောင် ဒီနည်းပဲရှိတယ်’
‘ဟဟဟ၊ ကောင်းလိုက်တာ မင်းတို့အဲဒီလို ခံစားနေရတာ’၊
‘ငါခံစားရသလို မင်းတို့လည်းခံစားရမယ်’၊ ‘ဟားဟားဟား’
‘မင်းဟာ သောက်သုံးမကျတဲ့ကောင်၊ ဘဝကိုဖျက်ဆီးတဲ့ကောင် ခုတော့ မင်းသမီးကြောင့် မင်းနာကျင်ရပြီ မဟုတ်လား’
ထိုသူသည် အဆုံးစွန်ထွက်နေသော ဒေါသတွေနဲ့ ကျနော်ကို စကားတွေ ဆက်တိုက်ပြောဆို စွပ်စွဲလို့နေပါသည်၊ သူရဲ့မျက်နာတွင် အမုန်းမီးလျှံတွေကို ကျနော်တွေ့နေရသည်၊
ထိုသူ၏မျက်နှာ အထူးသဖြင့် မျက်လုံးကို သေချာကြည့်ပြီး ကျနော်မေးလိုက်သည်၊
“သီရီက ကျနော့်သမီး ဖြစ်တယ်လို့ ဘယ်သူကပြောသလဲ”
‘ဟိုဟိုဟို’ ‘သူ့အမေ ကိုယ်တိုင်ပြောတာကွ၊ ဆယ့်ငါးနှစ်လုံးလုံး ငါ့မှာ သမီးလေး သမီးလေးဆိုပြီး ဖြစ်ခဲ့ရတာ၊ အဲဒီမှာ ငါနွားဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်’၊ ထိုအချိန်တွင် ထိုသူသည် မျက်ရည်တွေကျလာသည်၊
“ခင်ဗျား အဲဒါကို ယုံသလား”၊ “အဲဒီ မိန်းမပြောတာကို ယုံသလား”၊
‘ယုံတယ်၊ ငါ့မိန်းမ ငါ့ကို ကိုယ်တိုင်ပြောတာလေ၊ မင်းတို့ မလေးရှားမှာ ဖြစ်ခဲ့ကြတာတွေ၊ ကမြင်းခဲ့ကြတာတွေ၊ နောက်တော့ ငါဆီထိုးအပ်တယ်’
‘ပြော မင်း သောက်သုံးကျသလား၊ နောက် ဒီသမီးဟာ ခုနှစ်လနဲ့ မွေးခဲ့တာကွ’၊
“ဒီမယ် ကျနော်တို့ ဖြစ်ခဲ့ကြတာ၊ ကမြင်းခဲ့ကြတာ ခင်ဗျားမြင်သလား”၊
“လူတစ်ယောက်က ပြောလိုက်တာနဲ့ ယုံတယ်ဆိုတဲ့ သူတွေဟာ တော်တော်လေးကို အသုံးမကျတဲ့သူတွေ”၊
“ကမ္ဘာကြီးမှာ ခုနှစ်လနဲ့ မွေးတဲ့ကလေးတွေ အများကြီးပဲ၊ အဲဒါနဲ့ ခင်ဗျား ဆယ့်ငါးနှစ်လုံးလုံး ချစ်လာတဲ့ သမီးလေးကို ငါ့သမီးမဟုတ်တော့ဘူး တခြားတစ်ယောက်ရဲ့ သမီးဆိုပြီး၊ ခင်ဗျား မုန်းပစ်တယ်”၊ “သူ့အမေကို ကလဲ့စားချေချင်တာနဲ့ ကလေးဘာဖြစ်ဖြစ် ခင်ဗျားဂရုမစိုက်တော့ဘူး၊ ငါ့ကလေးမှ မဟုတ်တာဆိုတဲ့စိတ် ခင်ဗျားဝင်နေတယ် မဟုတ်လား၊ ဒီကလေးမှာ ဘာအပြစ်ရှိလည်း”၊
“ခုခင်ဗျားလုပ်လိုက်တာ လူတစ်ယောက်နဲ့တောင် ခင်ဗျားမတူဘူး၊ ဆိုသွမ်းနေတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းပြီး အဲဒီအမုန်းအတွက် ကလေးကို နှိပ်စက်တယ်လို့”
ထိုသူကလည်း ‘မင်းသောက်ပိုတွေ ပြောမနေနဲ့၊ ခုတော့ မင်းနာနေပြီ မဟုတ်လား၊ မင်း ငါ့မိန်းမအကြောင်း ဘယ်လောက်သိလိုလဲ’၊
“ဒီလိုလူမဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေအတွက် နာကျင်တယ်၊ ကိုယ်ချင်းစာတတ်တဲ့ သူတိုင်း နာကျင်မှာပဲ”၊
“ခင်ဗျားဆိုတဲ့သူက တော်တော် အသုံးမကျတဲ့သူ၊ သိပ်ချောတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် ယူထားပြီး ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမှန်း မသိတဲ့သူ၊ ဒါကြောင့် ခင်ဗျားချုပ်ချယ်သမျှ ခင်ဗျားမိန်းမ စိတ်ဆင်းရဲဖြစ်၊ ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်အကြား နေ့တိုင်းပြဿနာတွေ ဖြစ်၊ ခင်ဗျားမိန်းမ ခင်ဗျားကို မုန်းနေတာ ခင်ဗျားသိတယ်နော်”၊
“ဒီမှာ ခင်ဗျားမိန်းမ ခင်ဗျားကို တသက်လုံး ခံစားရအောင် လုပ်သွားတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား၊ အဲဒီ မိန်းမပြောတာကို ခင်ဗျားယုံသလား”၊ ကျနော်ထပ်မေးလိုက်သည်၊
‘အမေ က သမီးကို ခုတုံးလုပ်ပြီး ဒီလိုပြောဆို လုပ်ပါမလား၊ မင်းလည်း စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဦး’၊ ထိုသူကပြန်ပြောပါသည်၊
“ပြန်မေးရဦးမယ် ခင်ဗျားမိန်းမအကြောင်း ခင်ဗျားသေချာ မသိဘူးထင်တယ်”၊ ကျနော်မေးရင်း ဆက်ပြောလိုက်သည်၊
“ကိုယ့်ကလေး ဟုတ်မဟုတ် စစ်ကြည့်လို့ရတဲ့ နည်းတွေ အများကြီးပဲ၊ ခင်ဗျားဘာလို့ မလုပ်တာလည်း၊ ခင်ဗျား တစ်ဖက်သတ် ယုံပြီး ခံစားနေလိုက်တယ်၊ အမုန်းတွေပွားနေလိုက်တာ၊ ဟိုမိန်းမသိရင် သိပ်ပျော်နေမှာပဲ”၊ ထိုသို့ ကျနော်ပြောလိုက်သော အခါ ထိုသူ တွေဝေလို့လာသည်၊
“ဟုတ်တယ်၊ ကျနော် ခင်ဗျားမိန်းမ ပြောတဲ့အကြောင်းတွေကို သိခဲ့ရတယ် ဒါကြောင့်မို့လဲ ကျနော် သီရီကို စောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်၊ လိုအပ်ရင် စမ်းသပ် စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့တယ်၊ ကျနော်က အဲဒီ မိန်းမပြောတာကို မယုံဘူး၊ မလေးရှားမှ ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာ မသေချာဘူး၊ ခင်ဗျားထင်သလို ကျနော်တို့က ကမြင်းခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး၊ ခင်ဗျား သေချာစုံစမ်းသင့်တယ်”၊
“ဒါပေမဲ့ ခု ကျနော် သီရီကို ကျနော့်သမီး ဟုတ်မဟုတ်၊ စစ်ဆေးနေမှာ မဟုတ်ဘူး၊ စမ်းသပ်နေမှာ မဟုတ်တော့ဘူး”၊
“ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော် သီရီကို သမီးတစ်ယောက်လို ချစ်သွားလို့ပဲ၊ အမေတစ်ယောက်ရဲ့ အသုံးမကျမှု၊ ဖအေ တစ်ယောက်ရဲ့ အသုံးမကျမှုတွေဟာ၊ ကလေးပေါ် သက်ရောက်မှု မရှိစေရဘူး”၊ “ကလေးတစ်ယောက်ကို မွေးကတည်းက ဆယ့်ခြောက်နှစ်ထိ မကျွေးမွေး မစောင့်ရှောက်ခဲ့ပေမဲ့၊ လူငယ်တစ်ယောက်ကို ရှေ့ဆက် လမ်းမှန်ပေါ် ရောက်အောင်တော့ ကျနော် ပြုစုစောင့်ရှောက်သွား နိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်တယ်”၊
“သီရီဟာ ကျနော့်သမီး မဟုတ်ခဲ့ရင်တောင်မှ ကျနော်ပြောင်းလဲမှာ မဟုတ်ဘူး၊ ကလေးတစ်ယောက်ကို အဲဒီလောက် မခံစားစေချင်ဘူး”၊ ပြောရင်း ကျနော်အလိုလို မျက်ရည်တွေကျလာပါသည်၊ ထိုအချိန်တွင် သီရီလက်ချောင်းလေးတွေသည် ကျနော့်လက်ကို လာရောက် ဆုပ်ကိုင်လာသည်၊
“ကဲ ခင်ဗျားရဲ့ စိတ်ဆင်းရဲမှု တစ်ခုကို ကျနော်ယူသွားပြီလို့ မှတ်လိုက်ပါ”၊
“လာသမီး သွားကြမယ်” ဆိုပြီး ကျနော်သီရီ ကို ပွေ့ချီပြီး လှမ်းထွက်ခဲ့သည်၊
ထိုသူသည် နောက်က ပြေးလိုက်လာသည်၊ ငါ့သမီးဟုတ်မဟုတ် ငါစမ်းသပ်ဦးမယ် ဟေ့ကောင် နေဦး မပြေးနဲ့၊ ပြောဆိုအော်ဟစ်ရင်း ပြေးလိုက်လာသည်၊
‘မလိုက်လာနဲ့၊ ကျမ အဖေ မဟုတ်ဘူး၊ ကျမ အဖေ ဘယ်တော့မှ ပြန်ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး’၊
‘မလိုက်လာနဲ့၊ ကျမ အဖေ မဟုတ်ဘူး’၊
သီရီ၏ အားယူပြီး ပြောလိုက်သံကြောင့် တံခါးဝတွင် လူတစ်ချို့က ထိုသူကိုဖမ်းချုပ်ထားလိုက်သည်၊ ထိုသူကတော့ ပါးစပ်က တတွတ်တွတ်ပြောရင်း ရုန်းလို့နေပါသည်၊
ကျနော်သည် သီရီကို ဆေးခန်းတစ်ခုသို့ အမြန်ဆုံး ပို့နိုင်ဖို့ ခြေလှမ်းကျဲကြီးများဖြင့် ပြေးနေသလို ဖြစ်နေပါသည်၊ ဒါမှမဟုတ် သီရီကို ပြန်မပေးချင်လို့ ဆုံးရှုံးသွားမှာစိုးလို့လဲ ကျနော့်ခြေလှမ်းတွေ ပြေးနေခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
စင်္ကာပူတွင် ချစ်သူနဲ့ တွေ့သောအခါ ချစ်သူသည် ကျနော့်ကိုတောင်းပန်းခဲ့သည်၊ ချစ်သူက သူသည် ညံ့သောမိန်းမတစ်ယောက် ဖြစ်ကြောင်း ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူကို လက်လွတ်ဆုံးရှုံးခွင့် ပေးလိုက်ရအောင် ညံ့ဖျင်း သူတစ်ယောက်လို့ ဆိုသည်၊ ဒီလိုနဲ့ ကျနော်တို့ စကားတွေ ဆက်ပြောဖြစ်ကြသည်၊ ချစ်သူပြောတာကို နားထောင်ရင်း အားပေးရင်းနဲ့၊ နောက်ဆုံးတော့ ချစ်သူသည် ကျနော့် ရင်ခွင်ထဲသို့ ပြန်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
ချစ်သူပြောပြသည့်ထဲတွင် ထိုမိန်းမသည် မြန်မာပြည် ပြန်သွားပြီး ချစ်သူကို ကျနော်နဲ့ အဆက်အသွယ်ဖြတ်ပစ်ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့သည်၊ မဟုတ်ပါက အရှက်ရစရာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း အကျပ်ကိုင်ခဲ့လေသည်၊ ချစ်သူက ကျနော်ကို အဆက်အသွယ်ဖြတ်လိုက်ပြီး သိပ်မကြာမှီမှာ ထိုမိန်းမသည် ကိုကောင်းမြတ်ထူးနဲ့ လက်ထပ်လိုက်သည်၊ ကိုကောင်းမြတ်ထူးသည် သဘောထား သေးသိမ်သူဖြစ်ပြီး ထိုမိန်းမကို အရမ်းချုပ်ချယ်လေသည်၊ သူတို့တွင် သီရီဆိုသော သမီးလေးတစ်ယောက် ရှိလာခဲ့သည်၊ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော် စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရသည်၊ အကြောင်းမှာ ထိုမိန်းမသည် ရုတ်တရက်ဖျားပြီး ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်မှာ တစ်နှစ်ရှိပြီဆိုသည်၊ ထိုမိန်းမသည် ဆုံးခါနီး ကျနော့်ချစ်သူကို စကားတွေပြောခဲ့သည်၊ သူ့သမီးလေး၏အဖေသည် ကျနော်ဖြစ်သည်ဆို၏၊ နောက်ပြီး ထိုမိန်းမသည် ကျနော်ကို ခုထက်ထိ သူချစ်နေပါကြောင်း သူချစ်ခဲ့ပါကြောင်း ပြောပြီး ဆုံးပါးသွားခဲ့သည်၊ ထိုအတူ သူ့ခင်ပွန်း ကိုကောင်းမြတ်ထူးကိုလည်း သမီးလေး၏အဖေသည် ကျနော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီး ထိုမိန်းမသည် မသေခင်ပြောသွားခဲ့သည် ဆိုသည်။
သိပ်မုန်းဖို့ကောင်းသော ထိုမိန်းမသည် ကျနော်ကို တသက်လက်ဆောင် တစ်ခုပေးခဲ့ပါသည်၊ ဒါအပြင် မြန်မာပြည်တွင် ကျနော့်ကို သိပ်မုန်းတီးနေသူ တစ်ယောက်ကိုလည်း ရှိစေခဲ့ပါသည်။
ခုတော့ မြန်မာပြည်မှ ကျနော် ပြန်ရပါတော့မည်၊ အပြန်ခရီးမှာတော့ အသွားနဲ့မတူတော့ပါ၊
ကျနော်တွင် ခပ်ညံ့ညံ့ ဇနီးတစ်ယောက်ပါလာခဲ့ပြီး သမီးတစ်ယောက်လည်း အဆစ်ရလာပါသေးသည်။
လေယာဉ်ပေါ်တွင် သီရီက ကျနော့်ကို အဖေလို့ခေါ်ပါသည်၊ ပြီးတော့ ကျနော့်ကို တီးတိုးစကားဆိုပါသည်၊ အမေက သူ့ကိုပြောခဲ့သည်တဲ့ သမီးရဲ့အဖေ ဘယ်သူလဲဆိုတာ သူလဲမသေချာဘူးတဲ့၊ သိဖို့လည်းမေမေက မကြိုးစားခဲ့ဘူးတဲ့၊ သမီးကတော့ အဖေလို့ပဲယုံသည်တဲ့၊ အဖေသမီးကို ချစ်ရမယ်နော်တဲ့၊
ကျနော့်အတွက် ဒီသမီးရဲ့ အမေလောက် သိပ်မုန်းဖို့ကောင်းတဲ့ မိန်းမရှိမည် မထင်ပါ။
ကျနော့် သိပ်မုန်းတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ သမီးကို ချစ်ရဦးမည်ပေါ့။
ကံ ကံ၏အကျိုး ကို ယုံကြည်သူတစ်ယောက်၊ အကြောင်းကြောင့် အကျိုးဖြစ်သည်(ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်) ကို လေ့လာနေဆဲသူ တစ်ယောက်မို့၊ သံသရာမှာ သူကမုန်းလိုက် ကိုယ်ကမုန်းလိုက် မဖြစ်ချင်တော့ပါ၊ ဖြစ်နိုင်ရင် အမုန်းတွေကို ဒီဘဝမှာပဲ ထားခဲ့လို့ နေချင်ပါသည်။
Posted by sosegado at 7/25/2013 11:56:00 AM 13 comments Links to this post
သိပ် မုန်းဖို့ကောင်းတဲ့ မိန်းမ
မုန်းဘူးသလားလို့ မေးလာလျှင် မုန်းသည်ဆိုသော အရသာ၊ မုန်းသည်ဆိုသော ခံစားမှု၊ မုန်းသည်ဆိုသော အတွေ့အထိကို သေချာစွာ မသိခဲ့ရိုး အမှန်ပါ၊ သာမန်လူတွေလိုပင် မချစ်လျှင် မုန်းလို့ပေါ့ ဆိုပြီး၊ ဒီလိုပဲ ဘာသိဘာသာ နေထိုင်ခဲ့ဘူးသည်၊ အမုန်းကို စတင်တွေ့ကြုံ ခံစား တွေ့ထိလိုက် ရသောအခါမှ ဒါအမုန်းလားဆိုပြီး လေ့လာဆန်းစစ် မိပါတော့သည်၊ “ငါတကယ်ပဲ သူကိုမုန်းနေတာလား”၊ “သူကလည်း ငါကို တကယ် မုန်းနေတာလား”ဟူသော မေးခွန်းများနဲ့ စမိခဲ့ပါသည်၊ အားလုံးသည်လည်း တစ်ချိန်မဟုတ် တစ်ချိန်မှာတော့ အမုန်းကို စဉ်းစားဆန်းစစ် ခဲ့ဘူးမှာပဲလို့ ထင်မြင်မိသည်။
အချစ်၏ ဆန့်ကျင်ဘက်သည် အမုန်းမဟုတ်ပါ၊ အချစ်နဲ့ အမုန်းသည် သီးခြားဖြစ်တည်နေခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဟု ကဗျာဆရာများနဲ့ ပညာရှင်တစ်ချို့က ဆိုကြပါသည်၊ ထို့အတူ မကြိုက်ခြင်း မနှစ်သက်ခြင်း လက်မခံခြင်းများသည်လည်း အမုန်းမဟုတ်ကြောင်း ဆိုကြပြန်သည်၊ လူတော်တော်များများသည် မချစ်ခြင်း မကြိုက်ခြင်း မနှစ်သက်ခြင်း လက်မခံခြင်းများကို အမုန်းအဖြစ် မှားယွင်းခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုကြသည်၊ ဆယ်ကျော်သက်ရွယ် ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေးတို့ ချစ်ကြောင်းကြိုက်ကြောင်း ပြောသောအခါ ကောင်လေးက ‘နင်ငါ့ကို မချစ်ရင် မုန်းတယ်ပေါ့ မဟုတ်လား’လို့ မေးရင် အများအားဖြင့် ကောင်မလေးတွေက ‘ဟုတ်တယ်မုန်းတယ်လို့’ ပြန်ဖြေကြပါသည်၊ ကောင်လေးကလည်း သူငယ်ချင်းတွေကို ‘သူကငါ့ကို မချစ်ဘူး မုန်းတယ်လို့်’ ပြန်ပြော ကြလေ့ရှိပါသည်၊ ဒီလိုပဲ ရည်းစားကွဲသွားသောအခါ ငါကိုမုန်းသွားပြီကွာလို့ ပြောကြလေ့ရှိပါသည်၊ လူအများလည်း ပြောခဲ့ဖူးကြမည်လို့ ကျနော်ထင်ပါသည်၊ ဒီဘက်နိုင်ငံတွေ ရောက်လာသောအခါ တော်တော်များများသည် ‘I hate it’, ‘I hate it’ ဆိုသောစကားကို လွယ်လွယ်ကူကူ သုံးလေ့ရှိသည်၊ အိမ်စာမလုပ်ချင်သော ကလေးလေးကလည်း ‘I hate it’ ၊ ကာတွန်းချယ်နယ်ကိုပဲ ကြိုက်သောကလေးက သတင်းချယ်နယ်တွေကို ‘I hate it’ လေ့ရှိပါသည်။
“The opposite of love is not hate, it's indifference. The opposite of art is not ugliness, it's indifference. The opposite of faith is not heresy, it's indifference.”ဟု အီလီ ကဆိုပါသည်၊
အချစ်နဲ့အမုန်းတို့တွင် တူညီချက်တွေ ရှိကြပါသည်၊ အချစ်နဲ့အမုန်းသည် နှလုံးသားထဲက စတင် ပေါက်ဖွားလာခြင်း ဖြစ်ပါသည်၊ မြင်မြင်ချင်းပဲ ချစ်မိတတ်သလို မြင်မြင်ချင်းပဲ မုန်းတတ်ပါသည်၊ ရန်သူဖြစ်နေပါစေ အချစ်ကြီး ချစ်တတ်ကြသလို၊ ညီအစ်ကို ဖြစ်နေပါစေ အမုန်းကြီး မုန်းတတ်ကြပါသည်၊ လောကနိယာမအရ အချစ်ကြီးချစ်နေသူသည် အမုန်းဆုံးလူအဖြစ် အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါသည်၊ အမုန်းကြီး မုန်းနေသူသည် အချစ်ဆုံးသူအဖြစ် သာမန် လူသားတွေအတွက် အလွယ်တကူ မပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါလို့ စိတ်ပညာရှင် များက ဆိုပြန်သည်၊ သေချာသည်က အမုန်းသည် မကြိုက်ခြင်း မနှစ်သက်ခြင်း လက်မခံခြင်းများထက် ပိုပေသည်၊ အမုန်းသည် အချစ်လိုပဲ အာရုံထဲ စိတ်ထဲစွဲကျန်ရစ်နေသည်၊ တစ်ခါတစ်လေ တစိမ့်စိမ့် ခံစားရသည်၊ ထိုခံစားမှုသည် ဒေါသထွက်ခြင်းမှစကာ တစ်ခုခုပြုလုပ်လိုခြင်း အဖြစ် ကာယကံမြောက် ကျူးလွန်ခြင်းအထိ ရောက်သွားတတ်လေ့ ရှိသည်။
ဤတွင် အနောက်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အမုန်း ဖွင့်ဆိုပုံနဲ့ အရှေ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အမုန်းဖွင့်ဆိုပုံတွင် အရှေ့နိုင်ငံသားတွေက ပို၍လေးနက်ပေသည်၊ အရှေ့နိုင်ငံသားတွေ အတွက် အမုန်းသည် သာမန် မကြိုက်ခြင်း မနှစ်သက်ခြင်း လက်မခံခြင်းများထက် ပိုပါသည်၊ နှလုံးသားထဲက အတွင်းစိတ်ထဲက ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
မုန်းတီးမှုဖြင့် အတန်းဖေါ်များကို သေနတ်နှင့် ပစ်ခတ်ခဲ့သော အရှေ့တိုင်း ကျောင်းသားတစ်ယောက်၏ ဦးနှောက်ကို Neurologicalနည်းဖြင့် fMRI scan ဖတ်ကြည့်သောအခါ၊ မုန်းတီးမှု ဖြစ်ပေါ်နေချိန်တွင် ဦးနှောက်အတွင်း middle frontal gyrus, right putamen, frontal pole နှင့် cortex အပိုင်းတို့၏ လှုပ်ရှားမှုကို ထင်ရှားစွာတွေ့ရသည်၊ အမုန်းစိတ်ကြောင့် ဦးနှောက်အတွင်း ထိန်းချုပ် ခိုင်းစေမှုများ ပရမ်းပတာ ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်၊ အမုန်းစိတ်သည် လူ၏ ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံးကို ပြောင်းလဲစေနိုင်ကြောင်း သိပ္ပံနည်းကျ သက်သေပြချက် တစ်ခုပင် ဖြစ်ပါသည်။
ချစ်ခြင်းကို အဘိဇ္ဈာ မုန်းခြင်းကို ဒေါမနဿ ဟူ၍ BC ငါးရာကျော်တုန်းက အရှင်ဗုဒ္ဓသည် ချစ်ခြင်းနှင့် မုန်းခြင်း နှစ်မျိုးစလုံးသည် အကုသိုလ် ဖြစ်၏ ဆို၍ စိတ္တနိယာမတရားကို ဟောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်လေသည်၊ အာရုံမှ တဆင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော စိတ်ကို ကျနော်တို့ မထိန်းချုပ် နားမလည်နိုင်သရွေ့ ကျနော်တို့သည် ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်းဖြင့် အကုသိုလ် သံသရာလည် နေရပါတော့သည်။
လူဟူ၍ ဖြစ်လာပြီးနောက် ကျင်လည်ရာလောကတွင် ကျနော်တို့သည် ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်းကို ကြုံတွေ့ရမည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်လေသည်၊ အချစ်နှင့် အမုန်းသည် ကျနော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အမြဲရှိနေတတ်ပါသည်၊ ချစ်ခြင်းကိုပဲ သီးသန့် လိုချင်လို့မရ၊ မုန်းခြင်းကိုပဲ သီးသန့် လိုချင်လို့မရ၊ coexist အတူရှိနေမှုကို နားလည်လက်ခံနိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်ပေသည်၊ ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်းကို မချစ်ရ မမုန်းရ ဆို၍ ဥပဒေပြုလေသော် ထိုဥပဒေသည် သုံးရခက်သော ဥပဒေတစ်ရပ်ပဲ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
ကိုယ်က ချစ်ရတဲ့သူရှိသလို ကိုယ်က မုန်းရတဲ့သူလည်း ရှိမည်၊ ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့သူရှိသလို ကိုယ့်ကို မုန်းသူလည်း ရှိမည်၊ သံသရာအဆက်ဆက် တို့၏အကြောင်းအကျိုးတို့ပင် ဖြစ်လေသည်၊ ချစ်သူခင်သူ ပေါများသူ၊ အမုန်းနည်းသူတို့သည် သံသရာအဆက်ဆက်က ကောင်းမှုကုသိုလ်၏ အကျိုးအဆက်ကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြလေသည်၊ ထို သံသရာ အဆက်ဆက်ကြောင့်ပင် ရုပ်လေးမြင်လိုက်တာနဲ့၊ အသံလေးကြားလိုက်တာနဲ့၊ အကြောင်းလေးကို သိလိုက်ရတာနဲ့၊ ရေးထားသော စာများကို ဖတ်လိုက်ရုံနဲ့၊ နာမည်လေးကြားရုံနဲ့ပင် ကျနော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အမုန်းတွေ ဖြစ်ပေါ်လို့နေသည်၊ ထိုအမုန်းတွေဖြစ်ပေါ် နေသူများထဲတွင် ကျနော်သည် မိန်းမတစ်ယောက်ကို အလွန်မုန်းတီးခဲ့လေသည်၊
ထိုမိန်းမကို ကျနော်သည် သာမန် မကြိုက်တာလား မနှစ်သက်တာလား လက်မခံတာလား ဆန်းစစ်ပြီးမှ သေချာ မုန်းတီးနေတာဖြစ်ကြောင်း ကျနော်မှတ်ယူ ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်၊ ထိုမိန်းမသည် ကျနော့်အတွက် ပထမဦးဆုံးသော အလွန်မုန်းစရာကောင်းသော မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။
အလွန်ချစ်စရာကောင်းသော ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိပါသည်၊ ကျနော့်အတွက် သူ့စကားသံသည် ထာဝစဉ်ချိုမြနေသည်၊ သူ၏အပြုံးများသည် ယနေ့ထိတိုင် ကျနော်မျက်စိထဲက မထွက်ပါ၊ သူသည် ကျနော့် အတွေးများအားလုံး၏ ရာနှုန်းပြည့်ကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့လေသည်၊ ထိုမှတဆင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အောင် ကြိုးစားရင်း၊ ကျနော်သည် ထို ချစ်စရာ ကောင်မလေးနဲ့ ချစ်သူများဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
ချစ်စရာကောင်းသော ကျနော့်ချစ်သူနဲ့ ငါးကြိမ်မြောက် ချိန်းတွေ့သည့်အခါမှာတော့၊ ထိုမိန်းမကို ကျနော် စတင် မြင်ဘူး သိရှိခဲ့ရသည်၊ သူ့အစ်မ ဝမ်းကွဲလို့ မိတ်ဆက်ပေးသော်လည်း တစ်ကယ်တော့ နှစ်ဝမ်းလောက်ကွဲပါသည်၊ အထက်အောက် သူငယ်ချင်းလိုနေသည်ဟု ဆိုပေမဲ့ ထိုမိန်းမက ကျနော့်ချစ်သူပေါ်တွင် အရာရာကို အပေါ်စီးက နေနေသည်ဟု ကျနော်ထင်သည်၊ ညီမအတွက် ကျနော့်ကို လေ့လာလို၍ ခေါ်လာသည်ဆိုပေမဲ့ ဒီကောင် ဘာကောင်လဲ ဆိုတာ လာကြည့်ခြင်း ဖြစ်ပါလိမ့်မည်၊ ထိုမိန်းမအတွက် ကျနော်ပထမဦးဆုံး သတိပြုမိတာကတော့ ထိုမိန်းမ၏ ကျနော့်ကို ကြည့်သော အကြည့်ပဲဖြစ်ပါသည်၊ ဘယ်လိုပင်ပြုံးပြနေပါစေ ဘယ်လိုပင်ရယ်ပြနေပါစေ ထိုမိန်းမ၏ အကြည့်ကို ကျနော် မနှစ်မြို့ပါ၊ အမုန်းသည် မနှစ်မြို့သော အကြည့်က စတင်ခဲ့ခြင်းလို့ ဆိုနိုင်ပါသည်။
တကယ်ဆိုလျှင် မိန်းမများသည် ကိုယ်လုံးပေါ် မှန်ထဲတွင် ကိုယ်ကိုကိုယ် ပြန်ကြည့်ရင်း ကိုယ်သည် မုန်းစရာကောင်းနေသူ တစ်ယောက် ဟုတ်မဟုတ် ပြန်ကြည့်သင့်ပေသည်၊ မိန်းမတစ်ယောက်သည် အလွန်မုန်းစရာကောင်းနေသူ တစ်ယောက်ဖြစ်နေကြောင်း သူတို့ကိုယ်သူတို့ စဉ်စားမိလိမ့်မည် မထင်ပါ၊ ထိုသို့ထဲတွင် ထိုမိန်းမလည်း ပါဝင်ပါသည်။
ထိုမိန်းမသည် ကျနော်ချစ်သူထက် သူသည် ပိုလှကြောင်း ချောကြောင်း သွယ်ဝိုက်၍၎င်း နောက်ပြောင်သလို၎င်း ပြောလေ့ရှိသည်၊ ကိုယ်ချစ်သူထက် သူကပိုချောကြောင်း ရည်းစားရှေ့တွင် လာပြောနေသော မိန်းမတစ်ယောက်သည် ဘယ်လောက်မုန်းစရာ ကောင်းပါသလဲ စဉ်းစားကြည့်ကြပါ၊ တကယ်တော့ ဘယ်လိုပင်လှလှ ဘယ်လိုပင်ချောချော ကြိုက်နှစ်သက်မှုသည် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်စီနဲ့ သက်ဆိုင်သည်ဟု ထင်မိသည်။
နောက်ပြီး ထိုမိန်းမတွင် အနံ့ တစ်မျိုးရှိသည်ဟု ကျနော်ယုံကြည်သည်၊ ထိုအနံ့မျိုး ကျနော်ရလိုက်လျှင် ထိုမိန်းမသည် ကျနော်အနားတွင် ရှိနေပြီကို ကျနော်သိလိုက်ပါပြီ၊ မှန်လည်းမှန်နေပါသည်၊ ဒီအနံ့သည် ရေမွေးနံ့အောက်က ထွက်လာသော ပင်ကိုယ်အနံ့သာဖြစ်သည်၊ သူ၏ အနံ့သည် အိန္ဒိယအနွယ် အမျိုးသမီးများ၌ ရှိသော မဆလာအနံ့မျိုး မဟုတ်၊ ဂျပန်မတွေလို ငါးကြီးဆီ အနံ့မျိုးလည်း မဟုတ်၊ မြန်မာမိန်းမ အများစုလို သွေးဆေးနံ့လည်း မဟုတ်ပေ၊ ဥရောပသူတွေလို သံလွင်ဆီ အနံ့မျိုးလည်း မဟုတ်ပေ၊ ဒါပေမဲ့ ကျနော်အတွက် သိသာထင်ရှားသော အနံ့တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်ချစ်သူ ကောင်မလေး၏ ကိုယ်သင်းနံ့သည် ကျနော်အတွက် အကြိုက်နှစ်သက်ဆုံး အနံ့ပဲဖြစ်ပါသည်။
She thinks she isabeautiful, ….
Her smell like pig
Talking like bitch
Her brain is witch
Totally she isashit
ဘရုပ်ကလင်း လမ်းဘေးက ရက်စာသား များသည် ထိုမိန်းမကို ဖွဲ့ဆိုထားခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်၊ ထိုမိန်းမသည် စကားမပြောခင် ပြုံးသလိုလိုနဲ့ တခြားလူတွေကို ပမာမခန့်သလို မျက်နှာပေးပြီးမှ စကားပြောလေ့ ရှိပါသည်၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင် သူသာ အကုန်သိ သူသာအကုန်တတ် မျက်နှာပေးမျိုးနဲ့ လူတွေကို ဆက်ဆံတတ်သော မိန်းမများသည် ရွံစရာအကောင်းဆုံး မိန်းမများဖြစ်သည်ကို ထိုမိန်းမ မသိရှိခဲ့လေသလား၊ အမုန်းသည် ရွံစရာကောင်းသော စကားပြောပုံစံက စတင်ခဲ့ခြင်းလို့ ဆိုနိုင်ပါသည်။
ကျနော်ရော ကျနော်ချစ်သူ ကောင်မလေးပါ ရေခဲမုန့်ကြိုက်ပါသည်၊ ရေခဲမုန့်တစ်ခွက် သို့မဟုတ် ရေခဲမုန့်ကပ်တစ်ခုကို နှစ်ယောက်တူ စားရတာလောက် ရင်ခုန်ရတာ မရှိပေ၊ ရေခဲမုန့် ပေနေသော ချစ်သူနှုတ်ခမ်းလေးသည် အလွန်လှပပါသည်၊ ရေခဲမုန့်စားပြီး နမ်းရသော အနမ်းလောက် ချိုမြိန်မှုရှိတာ မရှိပါလို့ ကျနော်ထင်ပါသည်၊ ကျနော်တို့နှစ်ယောက် အပြင်ထွက်လျှင် အနည်းဆုံး မက်ဒေါနယ်က ငါးမူးတန် ရေခဲမုန့်တော့ ဝယ်စားဖြစ်ပါသည်၊ ထိုမိန်းမပါလာလျှင် ချစ်သူသည် ရေခဲမုန့်မစားတော့ပါ၊ ထိုမိန်းမသည် ရေခဲမုန့် မကြိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည် ဆိုသည်၊ ကျနော့်အတွက် အချိုမြိန်ဆုံး အနမ်းတွေ မရရှိတော့ပါ၊ ရေခဲမုန့် မကြိုက်သော မိန်းမ တစ်ယောက်သည် ကန့်လန့်ဖြစ်နေကာ၊ ဘယ်လို မုန်းစရာကောင်းသလဲ စဉ်းစာသာ ကြည့်လိုက်ကြပါတော့။
ထိုမိန်းမသည် ပခုံးထိရှည်သော ဆံပင်အရှည်ကို ထားပါသည်၊ အကြေကောက်တွေ ခေတ်စားတုန်းက အကြေကောက်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် အကောက်တွေ ခေတ်စားလာတော့ ဒစ်ဂျစ်တယ် အကောက်၊ တစ်ခါတစ်လေ အရောင်တောင် ထည့်လိုက်သေးသည်၊ ကိုယ်နဲ့လိုက်သည် မလိုက်သည်မသိ လိုက်ကောက်တတ်သော၊ အရောင်တွေဆိုးတတ်သော မိန်းမဖြစ်သည်၊ ကျနော်သည် ဆံပင်ရှည်ကို ခါးလည်အထိချထား တတ်သော မိန်းမများကို နှစ်သက်သူဖြစ်ပါသည်၊ ကျနော့်ချစ်သူ၏ ဆံပင်သည်လည်း ခါးလည်အထိ ရှည်ပါသည်၊ ထိုမိန်းမသည် စကားပြောနေရင်းနဲ့ ဆံပင်ကို ပွတ်သတ်လေ့ရှိပါသည်၊ တစ်ခါတစ်လေ ဆံပင်ကိုဝှေ့ရမ်းတတ်ပါသည်၊ ဒါပေမဲ့ ထိုသို့လုပ်၍ ဆွဲဆောင်စေခြင်းသည် ယောက်ျား တစ်ချို့အတွက် အလွန်ရယ်စရာဖြစ်နေသည်ကို ထိုမိန်းမသည် မသိရှိခဲ့လေသလား၊ ကျနော့်ချစ်သူ ကောင်မလေးသည် အလွန်တည်ငြိမ်သော မိန်းမတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
ထိုမိန်းမသည် အရပ်မနိမ့်ပါပဲနဲ့ အလွန်မြင့်သောဒေါက်မြင့်ဘိနပ်ကို အမြဲလိုလို စီးတတ်သည်၊ သာမန်မိန်းကလေးတို့သည် ဒေါက်မြင့်ဘိနပ်ကို ရံဖန်ရံခါ သို့မဟုတ် လိုအပ်မှ စီးတတ်ကြပါသည်၊ ထိုမိန်းမသည် တစ်ခါတစ်လေ ဒေါက်မြင့်ဘိနပ်ဖြင့် လမ်းလျှေက်နေရင်း ဘေးကို တစ်ချက်ချက် စောင်းကြည့်တတ်သေးသည်၊ သူ့ကိုယ်သူ အဟုတ်ကြီး ထင်နေသလား မသိပါ၊ ထိုသို့ စောင်း၍ကြည့်လိုက်ခြင်းကို လူအများက ဂရုပြုမိလိမ့်မည်၊ သူ့ကို နှစ်သက်ကြလိမ့်မည်ဟု ထင်နေခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်၊ မြင့်သောဒေါက်မြင့်ဘိနပ်ကို အမြဲလိုလို စီးတတ်သော မိန်းမများသည် ကိုယ်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု မရှိသော မိန်းမများ ဖြစ်သည်လို့၊ စိတ်ပညာရှင်များ ဆိုထားသည်ကို ထိုမိန်းမသည် မသိရှိ နေရော့သလား၊ ကျနော့်ချစ်သူ ကောင်မလေးသည် ဒေါက်မြင့်ဘိနပ်ကို တစ်ချို့ ပွဲတက်သော အခါမှာပဲ စီးလေ့ရှိပါသည်။
မြင့်သောဒေါက်မြင့်ဘိနပ်ကို စီးသော မိန်းခလေးများ ရှိပါလိမ့်မည်၊ ဆံပင်ကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ကောက်ပြီး အရောင်ဆိုးထားသော မိန်းခလေးများ ရှိပါလိမ့်မည်၊ ခန္ဓာကိုယ်မှ အနံ့တစ်မျိုးရှိသော မိန်းခလေးများ ရှိပါလိမ့်မည်၊ ရေခဲမုန့် မကြိုက်သော မိန်းခလေးများ ရှိပါလိမ့်မည်၊ လူတွေကို ပမာမခန့် မျက်နှာပေးပြီး စကားပြောတတ်သော မိန်းခလေးများ ရှိပါလိမ့်မည်၊ ကိုယ်ကိုကိုယ် အရမ်းတတ် အကုန်သိသည်ဟု အဟုတ်ကြီး ထင်နေသော မိန်းခလေးများ ရှိပါလိမ့်မည်၊ ထိုထိုသော မိန်းခလေးများထဲမှာ ကျနော်သည် ထိုမိန်းမကို သိပ်မုန်းပါသည်၊ ထိုမိန်းမသည် ကျနော်ကို မုန်းရသည် ဆိုသည်ကို သင်ကြားပေးခဲ့သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်၊ အမုန်းနှင့်အတူ နာကြည်းမှု များကိုပါ ပေးလာသော သူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
လူငယ်တွေရဲ့ ရေစီးကြောင်း ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူ ကျနော်တို့ တစ်တွေ အဆင်ပြေရာနေရာကို ရှာရင်း စင်္ကာပူကို ရောက်လာခဲ့ကြသည်၊ ကျနော်နှင့် ကျနော့်ချစ်သူတို့သည် စင်္ကာပူတွင် လေးငါးနှစ်လောက်အလုပ်လုပ်ပြီး နှစ်ဦးထဲ ဘဝတစ်ခုကို တည်ထောင်ရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ပါသည်၊ ကျနော်တို့သည် စင်္ကာပူတွင် အလုပ်အကိုင် အဆင်ပြေခဲ့ပါသည်၊ တစ်ခုပဲ ရှိပါသည် ထိုမိန်းမသည် ကျနော့်ချစ်သူနဲ့အတူ စင်္ကာပူတွင် လာရောက် အလုပ်လုပ်ပါတော့သည်၊ ‘ဒီ စင်္ကာပူကို ထွက်လာလို့ ရအောင် သူတို့က ထောက်ပံ့ခဲ့တာပါ မောင်ရယ်၊ ကျမရဲ့ ကျေးဇူးရှင်တွေပါ’ဆိုတဲ့ ချစ်သူရဲ့ စကားကြောင့် ကျနော့်အမုန်းတို့သည် မျိုသိပ်ခဲ့ရလေသည်။
ထိုမိန်းမ မပါပဲ ချစ်သူနှစ်ဦး စင်္ကာပူတခွင် လျှောက်လည်ရသော နေ့ရက်အချိန်များသည် ကျနော်ဘဝအတွက် အပျော်ဆုံး အချိန်များ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်၊ ‘ကျမကို ချစ်ရင် ကျမပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကို မမုန်းရဘူး’ ဆိုတဲ့ ချစ်သူရဲ့ စကားကြောင့် ထိုမိန်းမကို အထိုက်အလျှောက် လျစ်လျူရှုနေခဲ့ရသည်၊ ကိုယ်မကြိုက်နှစ်သက်သူ မုန်းနေသောသူ တစ်ယောက်နဲ့ သွားလာနေရခြင်း၏ ဒုက္ခကို ကြုံဘူးမှ သိနိုင်ကြပါလိမ့်မည်၊ စင်္ကာပူတွင် အလုပ်၊ အိမ်၊ ချစ်သူနဲ့ လုံးလည်ပတ်ရင်း အချိန်တို့သည် ကုန်မှန်းမသိ ကုန်ခဲ့ပါသည်။
ရုံးပိတ်ရက်ရှည်တစ်ခု မရောက်ခင် ချစ်သူက မလေးရှားကို အလည်သွားဘို့ ဆိုလာသည်၊ နှစ်ယောက်ထဲ သွားဖို့ ကျနော် တိုက်တွန်းခဲ့သည်၊ ဒီလိုနဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦး Genting Highlands လို့ခေါ်တဲ့ ကာစီနိုကစားရုံရှိရာ အပန်းဖြေ တောင်ပေါ်မြို့သို့ သွားဖို့ ရွေးချယ်လိုက်ကြသည်၊ ခက်တာက နှစ်ယောက်ထဲ သွားချင်သည် ဆိုပါမှ၊ ချစ်သူက ထိုမိန်းမကိုပါ ခေါ်ရလိမ့်မယ်လို့ ဆိုလာသည်၊ အကြိမ်ကြိမ် ငြင်းခုံကြရင်း၊ ကြားနေကျ ဖြေရှင်းသံများကို နားထောင်အပြီး၊ ချစ်သူအလိုကို လိုက်တတ်သော ကျနော်သည်၊ နောက်ဆုံးတော့၊ စိတ်ထဲက မပါသော်လည်း ထိုမိန်းမကို ခေါ်ဖို့ သဘောတူလိုက်ရသည်။
ကိုယ်ထင်သည့်အတိုင်း ဖြစ်မလာသည့် ဒီခရီးစဉ်အတွက် ချစ်သူအလိုကျ ကျနော် နေပေးခဲ့သည်၊ သုံးညအိပ် ခရီးတွင် ပထမနေ့သည် နေဘက်တွင် ကစားကွင်း၊ ညဘက်တွင် ကာဆီနိုနဲ့ ထိုနေ့သည် ကုန်ဆုံးခဲ့သည်၊ ဒုတိယနေ့ရက်မှာတော့ အင်ဒိုး ကစားကွင်း ပတ်ဝန်းကျင်ခြံများသို့ သွားလည်ခြင်းဖြင့် နေ့ဘက် အချိန်တွေကုန်ခဲ့သည်၊ ကျနော်တို့ တည်းခိုသော ဟော်တယ်မှာ First World ဟော်တယ်ဖြစ်ပြီး၊ World Club Room mountain view ကိုရသည်၊ ၂၂ ထပ်မှ ကြည့်ရသော ရှုခင်းသည် လူကို တကယ်ကြည်းနူးစေပါသည်၊ ဒုတိယနေ့ ညမှာတော့ ချစ်သူက ညစာကို အခန်းထဲမှာပဲ တောင်ပေါ် ရှုခင်းတွေကို ကြည့်ပြီး၊ စားကြဖို့ ပြောလာသည်၊ နှစ်ရက်လည်ပတ်ခဲ့၍ အနည်းငယ် ပန်းလို့နေပါပြီ ဒါနဲ့ အားလုံးသဘောတူလိုက်ကြသည်၊ ချစ်သူက ရုံးက မဲပေါက်လာသော မာဂါရီတာ Margarita ကော့တေး တစ်ပုလင်းပါလာသည် ဆိုသည်၊ အရက်မသောက်သော်လည်း ထူးထူးခြားခြား ရလာသဖြင့်၊ မိန်းကလေးအကြိုက် အဖျော်ယာမကာလည်း ဖြစ်သောကြောင့် စမ်းသောက်ကြည့်မည် ဆိုသည်၊ ညစာစားမည့် အခန်းကိုတော့ ကျနော့်အခန်းကိုပဲ ရွေးလိုက်သည်၊ သူတို့အခန်းမှာ နှစ်ယောက် ပစ္စည်းတွေ ရှုပ်ပွနေသောကြောင့်လို့ ဆိုပါသည်။
ဟော်တယ် စားသောက်ဆိုင်မှ အစားအစာများကို မှာယူကာ ကျနော်တို့၏ ညစာစားပွဲ ကလေးကို ညကိုးနာရီလောက်မှ စဖြစ်ခဲ့သည်၊ ချစ်သူသည် မာဂါရီတာစပ်နည်းကိုပါ မေးမြန်းလာပြီး သူကိုယ်တိုင်စပ်ပါတော့သည်၊ တစ်ခွက် နှစ်ခွက်ပဲ စမ်းသောက်ကြည့်မည် ဆိုသော သူတို့သည် တစ်ခွက် နှစ်ခွက် မကတော့ပါ၊ ချစ်သူမှုးမှာစိုး၍ ကျနော်ကလည်း ယူယူသောက်ဖြစ်သည်၊ မှုးရီနေသော ချစ်သူသည် ကျနော် ရင်ခွင်ထဲက မထွက်တော့ပါ၊ ဘယ်အချိန် မာဂါရီတာ ပုလင်းကုန်သွားသလဲ၊ ဘယ်အချိန်စားလို့ ပြီးသွားသလဲ၊ ကျနော် မသိတော့ပါ၊ ချစ်သူကို ရင်ခွင်ထဲ ထည့်ပြီးကျနော် အိပ်ပျော်ခဲ့သည် ထင်ပါသည်။
အပြင်မှ အသံတစ်ချို့နဲ့ အလင်းရောင်ကြောင့် မိုးလင်းနေပြီ ဆိုတာကို ကျနော် သိလိုက်ပါပြီ၊ ထပြီး မျက်နှာသစ်မလို့ လုပ်ရာတွင် တစ်စုံတစ်ခုတော့ မှားယွင်းနေပြီ ဆိုတာကို ကျနော်သိလိုက်ပါသည်၊ ဟာဆိုသော အသံနဲ့အတူ ကျနော်တုန်လှုပ်သွားရသည်၊ ရုတ်ခြည်း ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ကြောင်အန်းအန်း ဖြစ်လို့နေပါသည်၊ ညက ဟုတ်သည် ညက ကျနော်ဘာဆိုဘာမှ မမှတ်မိတော့ပါ၊ ခုတော့ ကျနော်သည် ခုတင်ပေါ်တွင် အဝတ်အစားများ မရှိပါ၊ ကျနော်ဘေးတွင်တော့ ခုထက်ထိ အိပ်ပျော်နေသော အဝတ်အစားများ မရှိသည့် ထိုမိန်းမပါပဲ။
ထိုမိန်းမ၏ အဝတ်အစားများမရှိ အိပ်နေသော ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ပြီး ဘာဖြစ်ခဲ့တာလည်း၊ ဘယ်လိုဖြစ်တာလည်း၊ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ စဉ်းစားလို့နေမိသည်၊ အံ့သြခြင်းနဲ့ ပူပင်မှုတွေက အဖြေထွက်မလာခဲ့ပါ၊ တကယ်တော့ ကျနော် တုန်လှုပ်နေပါပြီ၊ ထိုအချိန်တွင် ထိုမိန်းမ နိုးလာပါတော့သည်၊ ဘယ်လိုလဲ ဘာဖြစ်တာလဲ ဆိုတာနဲ့အတူ သူ့အဝတ်အစားတွေကို ဝတ်ဖို့လိုက်ရှာနေပါသည်၊ ထိုအချိန်တွင် ချစ်သူသည် ကျနော့် အခန်းထဲသို့ ရောက်လာပါသည်၊ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်ကိုမြင်သောအခါ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမောင်၊ ဘာတွေဖြစ်တာလဲမောင်၊ တမောင်မောင်နဲ့ မေးခွန်းတွေ ဆက်တိုက်မေးပါတော့သည်၊ မေးရင်းနဲ့လည်း မျက်ရည်တွေကျလို့နေသည်၊ ကျနော်လည်း ဘာဖြစ်ခဲ့မှန်းမသိဘူး၊ ညကဘာကိုဘာမှ မမှတ်ဘူးလို့ ထပ်ပြောနေမိပါသည်၊ ထိုမိန်းမကတော့ ဘာကိုမှ မပြောဘဲ အဝတ်အစားတွေ ပြန်ဝတ်ကာ ကျနော့်အခန်းထဲက ထွက်သွားပါသည်။
ချစ်သူက ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လည်း ဘယ်လိုဖြစ်တာလည်းပဲ ထပ်တလဲလဲမေးနေသဖြင့်၊ ကျနော်က တကယ်ကို ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ မသိပါ၊ ချစ်သူကိုဖက်ပြီး အိပ်သွားခဲ့ကြောင်းကိုသာ သတိရကြောင်း ပြန်ဖြေရပါသည်၊ တကယ်လည်း ကျနော်ဘာမှ မမှတ်မိပါ၊ ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲလို့ ချစ်သူကမေးလာပါသည်၊ ဘာဖြစ်ခဲ့မှန်း မသိ၍ ဘာဆက်လုပ်ရမည်ကိုမသိဘူးလို့ ရိုးရိုးလေးဖြေခဲ့ပါသည်၊ ချစ်သူက အစ်မဟာ မိန်ကလေးနော်မောင်လို့ ဆိုလာပါသည်၊ ဒါဆို ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ သိရအောင် မင်းအစ်မ သွားမေးကြမယ် ဆိုပြီး သူတို့အခန်းကို ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်ထွက်ခဲ့ပါသည်၊ ထိုမိန်းမသည် အခန်းထဲတွင် မရှိတော့ပါ၊ သူ့ပစ္စည်းတွေလည်း မရှိတော့ပါ၊ ထိုမိန်းမသည် ကျနော်တို့ကို ဘာမှ မပြောပဲ တစ်ယောက်တည်း စင်္ကာပူကို ပြန်သွားပြီ ဆိုတာ ကျနော်တို့ သိလိုက်ရပါသည်၊ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်လည်း အခန်းအပ်ပြီး ရရာကားနဲ့ စင်္ကာပူသို့ ပြန်လာခဲ့ပါသည်၊ လမ်းတွင် ငေးမိုင်နေသော ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်သည် ဘာမှာ စကားမပြောဖြစ်ပါ၊ ကျနော်က ပြောဆိုရှင်းပြဖို့လုပ်သော်လည်း လောလောဆယ် ဘာမှ မသိချင်သေးဆို၍ ချစ်သူကို မလွန်ဆန်ဝံ့သော ကျနော်သည် ဆက်၍ မတိုးတော့ပါ၊ စိတ်ထဲမှာတော့ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်အတွက် လေးလံလို့ နေပါသည်။
ချစ်သူကို အိမ်ပြန်ပို့ပြီး၊ ထိုမိန်းမနဲ့တွေ့လျှင် သုံးယောက်အတူ ရှင်းရအောင် ကျနော်ဆီကို အကြောင်းကြားဖို့ အကြိမ်ကြိမ် မှာပြီး ကျနော်အိမ်သို့ ပြန်လာခဲ့ပါသည်၊ ချစ်သူယူလာသော 8:4:2 Margarita၏ အစွမ်းသည်၊ ညက ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ၊ ကျနော်ဘာကို ဘာမှ မမှတ်မိခဲ့ပါ၊ ချစ်သူထံမှ နှစ်ရက်တိတိ ဘာအဆက်အသွယ်မှ မရရှိခဲ့ပါ၊ ကျနော် သွားတွေ့သော်လည်း ချစ်သူက အတွေ့မခံပါ၊ ထိုမိန်းမသည် မြန်မာပြည်ကို ပြန်သွားပြီ ဆိုတာကတော့ သိခဲ့ရပါသည်၊ လေးရက်မြောက်သောနေ့မှာတော့ ချစ်သူက ဖုန်းဆက်လာသည်၊ ဖြစ်ခဲ့သော အကြောင်းတွေက ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် ဘယ်လိုမှ ရှေ့ဆက်ခရီး မဖြစ်နိုင်တော့ကြောင်း ချစ်သော်လည်း ကုသိုလ်ကံကြောင့် လမ်းခွဲရသည်လို့ မှတ်ယူရန်နဲ့ သူကိုခွင့်လွတ်ဖို့ ပြောသည်၊ သူလည်း မြန်မာပြည် ပြန်တော့မည် ဆိုသည်၊ ကျနော်လည်း မြန်မာပြည်သို့ လိုက်သွားခဲ့သည်၊ ချစ်သူကိုတွေ့ရန် အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစားသည်၊ ချစ်သူကို၎င်း ထိုမိန်းမကို၎င်း ကျနော်ဆက်သွယ်လို့ မရခဲ့ပါ၊ မြန်မာပြည်တွင် မရှိဘူးလို့ပြောကြသည်၊ ချစ်သူသည်၎င်း မုန်းသူသည်၎င်း ကျနော်ကို ရှောင်ပြေးသွားကြပါပြီ၊ ဒီလိုနဲ့ ကျနော်နဲ့ ချစ်သူတို့သည် ဝေးကွာ သွားခဲ့ရပါသည်။
ထိုခရီးကို သွားချင်သူကလည်း ချစ်သူပါပဲ၊ ထိုမိန်းမကို ခေါ်လာချင်သူကလည်း ချစ်သူပါပဲ၊ မာဂါရီတာ ပုလင်းကို ယူလာပြီး ညစာစားဖို့ လုပ်တာလဲ ချစ်သူပါပဲ၊ ချစ်သူကို ခွင့်လွတ်တတ်သော ကျနော်သည် ဒါတွေကို အပြစ်မပြောရက်ပါ၊ ကိုယ်ကိုတိုင်ကလည်း အသိလွတ်သွားခဲ့သည်ကိုး၊ ထိုညက ကျနော်သည် သမင်ဖြစ်ခဲ့တာလား မုဆိုးဖြစ်ခဲ့တာလား ကျနော်မသိပါ၊ ဦးတဲ့သူက တောမုဆိုးပဲ မဟုတ်ပါလား၊ ကျနော်သည် ထိုနေ့ကစ၍ အရက်သေစာ သောက်စားခြင်းကို လုံးဝရှောင်ကျဉ်ခဲ့ပါသည်၊ Genting Highlandsသို့ တသက်တွင် ဘယ်တော့မှ မသွားတော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်၊ နောက်ပြီး ကျနော်သည် ထိုမိန်းမကို နာကြည်းစွာ မုန်းမိပါသည်၊ ကျနော်၏ အချစ်ကိုဆုံးရှုံးသွားအောင်၊ ချစ်သူနဲ့ကွေကွင်းအောင် လုပ်ခဲ့သော သိပ် မုန်းစရာကောင်းတဲ့ မိန်းမ တစ်ယောက် မဟုတ်ပါလား။
ကြာခဲ့ပါပြီ၊ အချစ်ဆုံးရှုံးမှုကြောင့် ဘဝကိုမထိခိုက်စေရန် ကျနော်သည် မြန်မာပြည်နဲ့၎င်း စင်္ကာပူနဲ့၎င်း ဝေးရာကို ထွက်ခဲ့ပါသည်၊ ချစ်သူနှင့် မုန်းသူတို့၏ ဝေးရာကိုပါ၊ လုံးဝ အဆက်အသွယ် ဖြတ်တောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်၊ တကယ်တော့ သူတို့ဘက်က စ၍ အဆက်အသွယ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်၊ တစ်ခါတစ်လေတော့ ချစ်သူ ဘာလုပ်နေမသလဲ ဘယ်လိုနေမလဲ ဆိုတာကိုတော့ သတိရမိပါသည်၊ နောက်ပိုင်း ချစ်သူသည် ချစ်သူထပ်ရနေသလား မရဘူးလား ကျနော်လည်း မသိပါ၊ သေချာသည်က ကျနော်သည် ဘယ်မိန်းမကိုမှ ချစ်လို့ မရတော့တာပဲ ဖြစ်ပါသည်။
တစ်နေ့မှာတော့ ကျနော့်မိဘက ခဏ ပြန်လာဖို့ ပြောလာသည်၊ ကျနော်ကတော့ မပြန်ချင်ပါ၊ အသိမိတ်ဆွေ ဘလော့ဂါ ကိုကြီးကျောက်က ပြောလာပါသည်၊ “လူဆိုတာ ဘဝဆိုတာ တကယ်တော့ ဖြစ်ချင်တာတွေ ဖြစ်နေတာ၊ မဖြစ်ချင်တာတွေ ဖြစ်နေရတာ မဟုတ်ဘူး၊ ဖြစ်နေတာရဲ့ နောက်ကို လိုက်နေကြရတယ် ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိကြဘူး၊ ငါ ဖြစ်ချင်တာ ဖြစ်သွားခဲ့တယ်၊ ငါဖြစ်ချင်သလို မဖြစ်လာခဲ့ဘူး ဒီလိုပဲ ထင်နေကြတာ၊ ဘယ်သူနဲ့ ပေါင်းသင်း အိမ်ထောင်ပြုရမယ်၊ ဘယ်မှာနေရမယ်၊ ဘယ်မှာ အခြေချကြမယ်၊ ဘယ်မှာသေဆုံးရမယ် ဆိုတာ ဘယ်သူမှ သိကြတာ မဟုတ်ဘူး၊ မင်းချစ်သူနဲ့မင်း အိမ်ထောင်ပြုသွားပြီး မြဲကြမယ်လို့ မဆိုနိုင်ဘူး၊ ပေါင်းပြီးမှ ကွဲကြသူတွေ အများကြီးပါ၊ အဲလိုပဲ မြန်မာပြည်က ထွက်လာပြီး၊ ယိုးဒယားမှာပဲ သောင်တင် မလိုလို၊ မလေးရှားမှာပဲ သောင်တင် မလိုလို၊ စင်္ကာပူ မှာပဲ သောင်တင် မလိုလို၊ ဥရောပ အမေရိကား ရောက်လာသူတွေ ရှိသလို မြန်မာပြည် ပြန်ရောက်သွားကြတဲ့ သူတွေလဲ အများကြီးပါ၊ ကိုယ့်သင်္ချိုင်း ရှိရာကို သွားရစမြဲပဲ၊ တစ်ခါတစ်လေ တွေးမိတယ်၊ ဝဋ်ကြွေးတွေကို လှည့်ပတ်ပြီး ဆပ်နေရသလိုပါပဲ၊ ငါဆိုလည်း ယိုးဒယားလိုလို၊ စင်္ကာပူလိုလိုနဲ့ ဒီကိုရောက်လာခဲ့တာပဲ၊ ဒီရောက်တော့လည်း စိတ်သွားတိုင် ကိုယ်မပါတော့ဘူး၊ အေးပေါ့ ငါ့သင်္ချိုင်းက ဒီမှာကိုး၊ ဒါ အကြောင်းကြောင့် အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာ ငါယုံကြည်ခဲ့ပြီ၊ သံသရာ အဆက်ဆက်တွေကြောင့် ငါတို့ဘဝတွေ လည်ပတ်နေရဦးမှာပါ”၊
နောက် မိတ်ဆွေတစ်ယောက် ကလည်း “မင်း ခု မိဘတွေကို တွေ့လို့ရတုန်း အလည်ပြန်လိုက်ပါ၊ အနီးကပ် ကျေးဇူးဆပ်ခွင့် ရတုန်း ကျေးဇူးဆပ်ပါ”၊ ဒီစကားတွေကြောင့် ကျနော် အိမ်ကို အလည် ပြန်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
စင်္ကာပူက ရောက်လာသော သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကတော့ ‘ဟိုတစ်လောက မင်းဘယ်မှာ ရှိသလဲဆိုတာ မေဇင်ထွေးက မေးနေတယ်၊ ငါတို့လဲ မင်းသဘောအတိုင်း မသိဘူးပြောလိုက်ရတယ်၊ သူက မင်းကိုတွေ့ပြီး စကားတွေ ပြောစရာရှိတယ်ဆိုပဲ’၊ မေဇင်ထွေး ဆိုတာ ကျနော် ချစ်ခဲ့ရသူပါ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေက ဒီစကားတွေကို နားထောင်ချင်ပါသည်၊ ခုတော့ လွမ်းလွမ်းဆွေးဆွေး ဘာမှ ပြောစရာမရှိပါ၊ ကျနော်သည် ချစ်သူကို အလိုလိုက်သော ယောက်ျား တစ်ယောက် မဟုတ်တော့ပါ၊ ကြာခဲ့ပြီကိုး၊
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာပြည်ကို တစ်ခေါက် ပြန်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါသည်။
မြန်မာပြည်သို့ အပြန် စင်္ကာပူတွင် တစ်ရက်ဝင်နားလိုက်သည်၊ ဘယ်လို သတင်းရသွားသလဲ မသိပါ၊ ချစ်သူသည် ကျနော်နဲ့ တွေ့ဆုံ စကားပြောလိုသည် ဆိုသည်၊ မကြာပါဘူး ကျနော်ဆီ ဖုန်းဝင်လာပါသည်၊ မထင်မှတ်သော်လည်း မှတ်မိနေသေးသော အသံပါ၊ ကျမကို မှတ်မိသေးရဲ့လား၊ ကျနော့်အကြောင်းကို အမြဲစုံးစမ်းလျှက် ရှိသည်တဲ့၊ ကွဲသွားတာ ကြာပြီဆိုပေမဲ့ မနေ့တစ်နေ့ကလိုပဲ သူထင်ကြောင်း ဆိုလာသည်၊ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဒီအသံကို ဟိုတစ်ချိန်တုန်းကတော့ စောင့်ခဲ့ပါသည်၊ လွမ်းလွမ်းဆွေးဆွေး မရှိတော့ဘူးဆိုပေမဲ့၊ ပြန်လည်အမှတ်တရ ရှိလာပါသည်၊ ထိုမိန်းမသည် အိမ်ထောင်ပြုသွားခဲ့ပြီ ဆိုသည်၊ ကျနော့်ချစ်သူကတော့ ယနေ့ထိတိုင် အိမ်ထောင်မပြုသေးပါ၊ သူ့တွင်လည်း အပြစ်ရှိကြောင်း ခံယူကောင်း ခံယူထားနိုင်ပါသည်။
ချစ်သူက ဘာတွေကို ပြောချင်သလဲ ကျနော်မသိပါ၊ ထိုမိန်းမအတွက်ဆိုရင်တော့ ကျနော်သည် ဆက်နားထောင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ၊ နားထောင်စရာလဲ အကြောင်းမရှိပါ။ တဒင်္ဂ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော စိတ်လို့ဆိုဆို၊ တစ်စုံတစ်ရာ၏ တိုက်တွန်းမှုကြောင့်လို့ ဆိုဆို၊ ကျနော်သည် ချစ်သူနဲ့ တွေ့ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်၊ ချစ်သူကို အလိုလိုက်ခြင်း မဟုတ်ပေမဲ့၊ ရင့်ကျက်လာမှုနှင့်အတူ တွေ့ဆုံ စကားပြောရန် တစ်နေရာကို ချိန်းလိုက်ပါသည်၊ ၁၇နှစ်ကျော် အတွင်း ချစ်သူကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ပြန်မြင်ရဦးမည်ဖြစ်သည်၊ ရင်ခုန်ဦးမည်လို့တော့ မထင်ပါ။
Posted by sosegado at 7/16/2013 01:09:00 PM 12 comments Links to this post